† မြန်မာကက်သလစ်သာသနာ ၀က်ဆိုဒ်များလမ်းညွှန်
မြန်မာကက်သလစ် Website များ
မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ် သာသာနာဝက်ဆိုဒ် (စီဘီစီအမ်)
Download Myanmar ZawGyi-One Font Here!
ဘာသာတူ အပေါင်းတို့၏ နှလုံးပြည့်ဝစေတော်မူ၍ ချစ်လေးမြတ်ခြင်း မီးလျှံဖြင့်လည်း ထွန်းတောက်စေတော်မူပါ။
၀ိညာဉ်တော်မြတ်ကို စေလွှတ်သဖြင့် ဘာသာတူတို့၏ ၀ိညာဉ်တို့သည် သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းသို့ ရောက်ပါလ်ိမ့်မည်။
မြေမျက်နှာပြင်သည်လည်း အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသို့ ရောက်ပါလိမ့်မည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘာသာတူအပေါင်း တို့ကို သွန်သင်တော်မူပေသော အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်၊ ၄င်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မှန်ရာကို နှစ်သက်၍ သာယာချမ်းသာခြင်းကို ခံစားအံ့သောငှာ၊ အကျွန်ုပ်တို့ သခင်ယေဇူး၏ ကုသိုလ်တော် အကျိုးဆက်ကို ထောက်တော်မူ၍ အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
ဂုဏ်ကျေးဇူတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော မာရီယား သခင်မအား မင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်း။ ဘုရားသခင်သည် သခင်မ ကျိန်းဝတ်တော်မူ ၍ မိန်းမတကာတို့တွင် သခင်မသည် မွန်မြတ်တော်မူသည်။ သခင်မ၏၀မ်းတော်၌ ပဋိသန္ဓေယူတော်မူသော ယေဇူးသည်လည်း မွန်မြတ်တော်မူသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ မယ်တော်သန့်ရှင်းသော မာရီယား ယခုမှစ၍ သေခါနီးတွင် အပြစ်ရှိသူ အကျွန်ုပ်တို့ အဖို့ငှာ ဆုတောင်းပေးတော်မူပါ။ အာမင်။
ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကိန်းဝပ်တော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖ၊ ကိုယ်တော်၏ နာမတော်အား ရိုသေလေး မြတ်ခြင်းရှိပါစေသော်။ ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်သည် ရောက်ပါစေသော်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ကိုယ်တော်၏ အလိုတော်သည် ပြည့်စုံပါစေသော်။ နေ့စဉ်မပြတ် အလိုရှိအပ်သော အရာ အစားတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ယနေ့၌ပင် ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိခိုက်ကျူးလွန်သော သူတို့အား အကျွန်ုပ်တို့ ခွင့်လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကိုလည်း၊ အခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ နှောက်ယှက်ခြင်းအမှု့တို့၌ အကျွန်ုပ်တို့ကို ပါဝင်ခြင်းမရှိစေဘဲလျှက် မကောင်းဟူသမျှနှင့် ကင်းလွတ်စေ တော်မူပါ။ အာမင်။
အားလုံးစုံကို တတ်နိုင်တော်မူထသော၊ မိုးမြေတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူထသော ခမည်းတော်ဘုရားကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။ ခမည်းတော်၏ တစ်ပါးတည်းတော်သားတော် ယေဇူးခရစ္ဆတူး ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်သည်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပဋိသန္ဓေယူတော်မူ၍ ကညာမာရိယာမှ ဖွားမြင်တော်မူသည်။ ပုံစီဦး ပီလာတူး မင်းလက်ထက် ဒုက္ခစရိယာကျင့်ခံတော်မူ၍၊ တံကျင်၌ သတ်ထားသဖြင့် အသက်တော်ထွက်၍ အလောင်းတော်ကို သဂြိုင်္ဟ်သည်။ အောက်နိုမ့်ရာအရပ်သို့ ဆင်းကြွတော်မူ၍ တတိယ နေ့တွင် သေသည့်သူတို့အစုမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်။ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တတ်တော်မူ၍ အားလုံးစုံကို တတ်နိုင်တော်မူသော ခမည်းတော်ဘုရား လက်ယာဘက်မှာ ထိုင်၍ နေတော်မူသည်။ ထိုမှ ရှင်သူ သေသူတို့ကို စီရင်စစ်ကြောတော်မူရန် ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းအချက်တို့ကို ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားကို လည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသော ကက်သလစ်အသင်းတော်ကို လည်းကောင်း၊ သူတော်သူမြတ်အပေါင်းတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်၍ အချင်းချင်း အကျိုးကုသိုလ်တို့ကို ခံစားရကြောင်း၊ အပြစ်ဟူသမျှကို လွတ်ကြောင်း ကိုယ်ခန္ဓာ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်း၊ အစဉ်ထာဝရ အသက်ရှင်မည့်အကြောင်းတို့ကိုလည်း ယုံကြည် လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။ အာမင်။
အို... သခင်ယေဇူး ရွှေနှလုံးတော်၊ ဤနေ့ ကျွန်ုပ် လုပ်အံ့သမျှ၊ ကြံအံ့သမျှခံရသမျှသော ဒုက္ခများနှင့် ပို့အံ့သမျှသော ဆုတောင်း မေတ္တာများကို၊ ရွှေစိတ်အကြံတော်နှင့်၊ တလုံးတ၀တည်း ထားပြီးလျှင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော မယ်တော်၏ နှလုံးတော်ကို အမှီပြုလျက် ကိုယ်တော်အား တင်ပူဇော်ပါသည်။ အာမင်။
မှားယွင်းခြင်းနှင့်ကင်း၍ သစ္စာသမာဓိနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အိုမြတ်စွာဘုရား သခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီ၊ သန့်ရှင်းသောကာသိုလိပ်အသင်း တော် သွန်သင်သမျှကို တည်မြဲစွာ အကျွန်ုပ်ယုံကြည် ခြင်းရှိပါသည်။
အားလုံးစုံကို တတ်နိုင်တော်မူသော အနန္တ ကရုဏာသနားခြင်းနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ထားတော်မူရာ ကတိ တော်၌ လည်းအမြဲတည်တော်မူသော အိုမြတ်စွာဘုရားသခင် ယေဇူးခရစ္ဆ္ဆတူးသခင်၏ ကုသိုလ်တော် အကျိုးဆက်ကို ထောက်၍ ကျူးလွန်မိသော အပြစ်တို့၏ အခွန့်ချမ်းသာကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ထိန်းပါမူ နောင်ဘ၀၌ ထာဝရချမ်းသာကိုရပါမည့် အကြောင်း ကျွန်ုပ်တောင့်တ မျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသည်။
အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အတိုင်းမသိကောင်းမြတ်တော်မူ၍ ဂုဏ်တော်အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံ တော်မူသောကြောင့်၊ နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုယ်တော်ကို အရာခပ်သိမ်းတို့ထက် ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းရှိပါသည်။ သူတပါးကိုလည်း ကိုယ်တော် ၏ ရွှေမျက်နှာတော်ကို ထောက်၍ ကိုယ်ရှင်ကဲ့သို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းရှိပါသည်။
အထူးသဖြင့်မြင့်မြတ်တော်မူုလှသော ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၊ ပုဂိုလ်သုံးပါးတစ် ဆူဘုရား အမှန်ရှိတော်မူကြောင်းကို အကျွန်ုပ် ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုယ်တော်ကို ချစ်မြတ်နိုး ရိုသေသာ ဦးချရှိခိုးပါသည်။ အကျွန်ုပ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး ဟုတ်မှန်သော တရားအလင်းတော် သို့ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ညတွင် ကိုယ်လက်မကွာထားတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကို အဘယ်သို့ဆပ်တင်နိုင်ပါမည်နည်း။ ဒီနေ့တွင် ကျင့်ကြံ လုပ်ဆောင်သမျှကို ကိုယ်တော်အားပူဇော်ပါသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်မှ လွတ်ကင်းစေတော်မူပါမည့် အကြောင်းနှင့် ဘေးရန်အပေါင်းမှ ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါမည့် အကြောင်းကို အကျွန်ုပ်သည် ညွတ်တွား အသနားတော်မြတ်ခံပါသည် ဘုရား။ အာမင်
ဘုရားရှင်က အမိန့်တော်ရှိ ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်သော ကောင်းကင်တမန်တော်၊ ကျွန်ုပ်အား နေ့ညမပြတ် ဆုံးမသွန်သင်ကြည့်ရှုစောင်မတော်မူပါ။ အာမင်။
ယေဇူးသခင်သည် အသက်စွန့်တော်မူသည်။ အသက်စွန့်တော်မူသော စမ်းအိုင်သည် လူသားနှင့် ၀ိညာဉ်များ အတွက် ယိုစီးထွက်တော်မူ၍ ဂရုဏာတံခါး တော်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဖွင့်တော်မူ၏။ အို အသက်၏ စမ်းအိုင်တော်၊ တိုင်းတာ၍ မမှီနိုင်သော ဂရုဏာရှင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကိုယ်တော်၏ ဂရုဏာ တော်ဖြင့် လွှမ်းခြုံထားတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ အပေါ်သို့ အကုန်အစင် သွန်းလောင်းချ ပေးတော်မူပါ။
အသက်၏ စမ်းအိုင်တော်အဖြစ် ယေဇူး၏ နှလုံးတော်မှ ယိုစီးထွက်တော်မူသော အို အသွေးတော်နှင့် ရေတော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို အားကိုးပါ၏။ အာမင်။
(သီလှရှင်မြတ် ဖောစတီးနား - ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှာ ဆုတောင်းပေးတော်မူပါ။)
သနားခြင်း၏ မယ်တော် ဖြစ်ထသော ငြိမ်ဝပ်သာယာစွာ အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကို ပေးတတ်သော ကျွန်ုပ်တို့တောင့်တ မျှော်လင့်ရာလည်း ဖြစ်သော၊ သခင်မ မင်္ဂလာရှိစေ သတည်း။ ဆင်းရဲရာဌာန၌ ရှိနေကြသော ကျွန်ုပ်တို့ ဧ၀သားစုတို့သည် သခင်မထံတော်သို့ကြွေးကြော်လျှောက်ပါသည်။ ဤမျက်ရည်ယိုရာအရပ်က ညည်းတွား ငိုကြွေးခြင်းနှင့် သခင်မနောက်တော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုပန်တောင်းကြ ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဖြစ်သော သခင်မ၊ သနားတတ်သော မျက်စိတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ လှည့်လည်တော်မူပါ။ ကြင်နာသနားခြင်း၊ ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်း၊ သိမ်မွေ့နူညံ့ခြင်း သီလနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အို... ကညာ မာရီယား၊ ဤဆင်းရဲရာဌာနမှ လွတ်မြောက်သောအခါ သခင်မ၏ ၀မ်းခေါင်း၌ စွဲနေတော်မူပြီးသော အထူး အလွန်မွန်မြတ်တော်မူလှသော သားတော်ယေဇူးကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူပါ။
အိုကျေးဇူးပြုတတ်သောသီလရှင်မြတ် သခင်မထံခိုလှုံသောသူမည်သည်ကား သခင်မစောင်မခြင်းကို မခံရဘဲ နေသည်ဟုမကြားဖူးသောကြောင့် အပြစ်ရှိသူကျွန်ုပ်တို့ ပူဆွေးဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် သခင်မထံတော်သို့ လုံးလုံးကြီး ကိုးစား ခြင်းကပ်ရောက်လာကြပါသည်။ လူအပြစ်ကိုယူတော်မူသောသားတော်ဘုရား မြတ်မယ်တော် ကျွန်ုပ်လျှောက်တောင်းသည့်ဆုကို ငြင်းပယ်တော်မမူပါနှင့် ဂရုဏာသနားခြင်းဖြင့်နာခံတော်မူပါ။
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ်
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ် အရှင်မြတ်တို့အား ကျွန်ုပ်၏နှလုံးနှင့် အသက် ၀ိညာဉ်ကို ကျွန်ုပ်အပ်နှံ ပူဇော်ပါ၏။
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ် ကျွန်ုပ်အသက်ထွက်ခါနီးသော အခါ ကျွန်ုပ်ကို ကြည့်ရှုစောင်မတော်မူကြပါ။
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ် အရှင်မြတ်တို့၏ အပေါင်းအသင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်း နှင့် သေရပါစေသော်။
ရွှေလက်တော် ၌ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို အပ်လိုက်ခြင်းမေတ္တာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်သေရကြောင်းကို အမှန်သိပါသည်။ သေခြင်းအချိန်ကိုကား အကျွန်ုပ်မရိပ်မိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်မအိပ်ခင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ကို ရွှေလက်တော် ၌ အပ်လိုက်ပါသည်။ အလိုတော်ရှိ၍ ချိန်းချက်တော်မူသည့်အချိန်၌ အသက်ဆုံးခြင်းကို ခံချင်ပါသည်။ ထိုကြောက်မက် ဖွယ်သော အချိန်ပေါ်လာသောအခါ သခင်ယေဇူး၏ မျက်နှာတော်ကို ထောက်တော်မူ၍ အပြစ်များကို ချမ်းသာပေးသနားတော်မူပါ။
( ၁ ) ဘုရားတစ်ဆူအပြင်မည့်သည့်အရာ သတ၀ါကိုဘုရားအမှတ်နှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုမပြုလင့်။
( ၂ ) ဘုရားရှင်၏နာမတော်မြတ်ကို မရိုမသေ သုံးဆောင်ခြင်းကိုမပြုလင့်။
( ၃ ) ဘုရားရှင်၏သတင်းပွဲနေ့တို့ကိုဆောင့်လော။
( ၄ ) မိဘတို့အားရိုသေခြင်းကိုပြုလော။
( ၅ ) လူ၏အသက်ကိုသတ်ပုတ်ခြင်းကို မပြုလင့်။
( ၆ ) ကာမဂုဏ်အမှုကို ကျူးလွန်ခြင်းကိုမပြုလင့်။
( ၇ ) သူ၏ပစည်းဥစာကိုခိုးယူခြင်းကိုမပြုလင့်။
( ၈ ) မုသားသက်သေခံခြင်းကို မပြုလင့်။
( ၉ ) သူ၏သားမယားကိုတက်စွမ်းခြင်းမရှိစေလင့်။
၁။ တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် ဘာသာဝတ်တရားပွဲ့နေ့တို့တွင် Mass နာယူကုန်လော။
၂။ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် အာပတ်ဖြေကုန်လော။
၃။ အနည်းဆုံး ပါစကားပွဲကာလတွင် ကိုယ်တော်မြတ်ကိုပင့်ယူကုန်လော။
၅။ မိမိတက်စွမ်းသမျှနှင့် အသင်တော်၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းလော။
၆။ လက်ထက်ထိမ်းမြားခြင်းအမှု့၊ မပြုအပ်သည့်ကာလနေ့တို့ ၌လည်း ရှောင်ကုန်လော့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်း မေတ္တာသည် မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ချစ်ခင်လေးမြတ်ခြင်း တောင်ပံများကို အားပြုလျက် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ပျံတတ်ပါစေ။
နွေးထွေးသော နံနက်နေရောင်ခြည်သည် နုနယ်လှသော နှင်းဆီပွင့်ဖူးကလေး များကို ခြုံလွှမ်းထားသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်သည် လူငယ်များ၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို လွှမ်းခြုံတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ ၀ိညာဉ်တော်သည် ကျေးဇူးတော် များနှင့် ပြည့်နှက်လှပါ၏။ ၀ိညာဉ်အပေါင်းတို့၏ မျှော်လင့်အားထားရာလည်း ဖြစ်ပါ၏။
ကောင်းမြတ်တော်မူထသော အိုသခင်၊ ထိုဝိညာဉ်ကလေးများ၏ တိုးတက်မှုအတွက် ဒုက္ခအခက်အခဲများကို ခံထမ်းရန် ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိတော်မူပါလျှင် ထိုဝိညာဉ်ကလေးများသည် ပေးအပ်သော ဒုက္ခများကို ခံထမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်သော ခွန်အားကျေးဇူးကို ပေးတော်မူပါ။ လူငယ်ကလေးများ၏ လိမာရေးခြားရှိမှုဖြင့် မိဘ ဆရာသမားတို့အား ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့မှုကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ထိုကလေးများ၏ အပြုအမူများကို ခရစ္ဆယာန်တို့၏ စံနမူနာဖြစ်စေတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်ရှင်၏ အလိုတော်မြတ်အတိုင်း မေတ္တာတရားပွားများခြင်း၊ အနစ်နာခံလိုစိတ်ရှိခြင်းနှင့် သတိပညာရှိခြင်းတို့ကို လူငယ်များ၏ ၀ိညာဉ်တွင်းသို့ ပေးသွင်းတော်မူပါ။
ဤမတည်မြဲသော လောကထဲတွင် ရှိစဉ်အခါ လိုအပ်သော ဘ၀၏ ပျော်ရွှင်မှုများကို လူငယ်များ အားပေး သနားတော်မူပါ။ ၀ိညာဉ်ရေးတွင်လည်း အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ကျေးဇူးတော်များကို စောင့်မသနားတော်မူပါ။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၏ အထွတ်ဖြစ်ရာ ထာဝရကောင်းကင်ဆုတော်ကို ထိုသူတို့အား ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
ပရိတ်သူငယ်တော်ယေဇူးထံ တန်ခိုးကြီးလှသော ဆုတောင်းမေတ္တာ
အို ပရိတ်သူငယ်တော်ယေဇူး၊ သူငယ်တော်၏ မယ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို ကူညီမစခြင်း ပေးသနားတော်မူပါ။ ဤဆုလာဒ်ကိုလည်း သူငယ်တော်မြတ် ကျွန်ုပ်အား ပေးသနားတော်မူမည်ဟု လုံးလုံးကြီး အားထား၍ ယုံကြည်ပါသည်။ ကျေးဇူးတော်များလည်း ပေးသနားတော်မူမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ချစ်လှစွာသော ယေဇူးကို စိတ်အားရှိသမျှ နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချစ်ပါသည်။ သူငယ်တော်ကိုလည်း ပြစ်မှားခြင်း ပြုခဲ့သည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းသဖြင့်် နာကျင်ခြင်းစွဲပါသည်။ သူငယ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သူငယ်တော်ကို မည်သည့်အခါမျှ ထိခိုက်ခြင်း မပြုတော့ပါ။ အပြစ်များကို ကြဉ်ရှောင်နိုင်စေရန် ဆုကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ထို့ကြောင့် သူငယ်တော်ကို ချစ်သကဲ့သို့ မိမိနှင့်နီးစပ်သောသူကိုလည်း ချစ်ပါမည်။ အလုံးစုံကို တတ်နိုင်တော်မူ ထသော သူငယ်တော်မြတ် တဖန်ကျွန်ုပ်၏ တောင်းဆိုချက်ကို ပေးသနား တော်မူပါ။
(လိုလားသော အချက်ကို ဖော်ပြပါ။)
အစဉ်သီလနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မယ်တော်၊ မွန်မြတ်သောဇူဇယ်နှင့် အတူတကွ၊ ယေဇူးသူငယ်တော်နှင့် ကောင်းကင်ဘုံ သိကြား ရဟန္တ္တာအပေါင်း တို့နှင့် အတူ ကျွန်ုပ်ရှိခိုးထောပနာအမြဲပြုနိုင်စေရန် အတွက်၊ ကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
ကလေးသူငယ်သဘွယ် မိဘကို အားကိုးသောစိတ်နှင့် ကျင်းပရန် တန်ခိုးကြီးသော နိဗေနာ
အို ယေဇူးအရှင်မြတ် တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်၊ ရှာလျှင်တွေ့လိမ့်မည်၊ ခေါက်လျှင်ပွင့်လိမ့်ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်၊ ကိုယ်တော့်မယ်တော်၏ ပန်ကြားခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သော ကျေးဇူးကို ရပါရန် ခေါက်ပါသည်၊ ရှာလည်းရှာပါသည်၊ တောင်းလျှောက်လည်း တောင်းလျှောက်ပါသည်။
အို ယေဇူးအရှင်မြတ်၊ ငါ၏ နာမတော်အားဖြင့် တောင်းလျှောက်ရာ ဟူသမျှကို ငါ၏ ခမည်းတော်သည် သင့်အားပေးလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့၏။
ကိုယ်တော်၏ အလွန်မွန်မြတ်သော မယ်တော်မာရိယား၏ ဆုပန်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သော ကျေးဇူးကို ကိုယ်တော်၏ နာမတော်အားဖြင့် အဘခမည်းတော်ထံမှ ရရှိနိုင်ရန် အနူးညွတ် စိတ်အားထက် သန်စွာနှင့် အသနားခံပါသည် ဘုရား။
အို ယေဇူးအရှင်မြတ် ကောင်းကင်နှုင့်မြေကြီး မတည်သော်လည်း၊ ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ အလွန်မွန်မြတ်သော မယ်တော်မာရိယား၏ ပန်ကြားခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်လိုအပ်သော ကျေးဇူးကို ကိုယ်တော်ပေးသနားတော်မူမည်ဟု ကျွန်ုပ်မြဲမြဲစွာ ယုံကြည်ပါသည်။
ဘုန်းဂုဏ်တော်ကြီးမားလှသော စိန့်ဂျုဒ်၊ သခင်ယေဇူး၏ သစ္စာရှိလှသော တပည့်မိတ်ဆွေ၊ သစ္စာဖောက်သူ၏ အမည်ကြောင့် အများကသတိမရကြသော်လည်း၊ စကြာဝဠာတစ်ဝန်းလုံးက မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သည့် ကိစ္စများ၊ စိတ်ပျက်အားငယ်လက်မြှောက်ရသည့် ကိစ္စများကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် သူတော်သူမြတ်အဖြစ် အသင်းတော်က အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။
အတိဒုက္ခရောက်နေသည့် အကျွန်ုပ်အဖို့ငှာ ဆုတောင်ပေးတော်မူပါ။ အရှင်မြတ်အား ဘုရားသခင်က ပေးထားသည့် အခွင့်အရေးကို အသုံးပြု၍ အကျွန်ုပ် စိတ်ပျက်အားငယ်နေသည့် ကိစ္စတွင် လျှင်မြန်စွာ ကျေးဇူးပေးပါမည့်အကြောင်း တောင်းပန်ပါသည်။ အကျွန်ုပ် အလွန်ပင် လိုအပ်နေသည့် အချိန်တွင် အကူအညီပေးသနားတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ခံစားချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် တောင်းလျှောက်ချက်များအတွက် ကောင်းကင်နိုင်ငံမှ နှစ်သိမ့်ခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်း၊ ခံစားရခြင်းအလို့ငှာ အထူးသဖြင့် (လိုအပ်သောဆုကို တောင်းရန်) အတွက် ကူညီ၍ အကျွန်ုပ်ကိုလည်း သူတော်သူမြတ်နှင့် အတူ ဘုရားသခင်နှင့် သူတော်သူမြတ်အားလုံးတို့အား အစဉ်ထာဝရ ချီးမွမ်းထောပနာပြုနိုင်ပါမည့် အကြောင်း တောင်းလျှောက်ပါသည်။
မွန်မြတ်လှသော အရှင်မြတ် စိန့်ဂျုဒ်၏ ကြီးမြတ်လှသော ဤ ဆုကျေးဇူးတော်ကို သတိရစွာဖြင့် အရှင်မြတ်အား ကျွန်ုပ်၏ အထူးဘုန်းဂုဏ်တော်ရှိလှသည့်် သူတော်သူမြတ်အဖြစ် အစဉ်အမြဲဂုဏ်ပြုလျက် အကျွန်ုပ်တတ်အားသမျှ အရှင်မြတ်အား လူအများခိုလှုံအားကိုးကြရန် အားပေးလုပ်ဆောင်ပါမည်။ အာမင်။
တန်ခိုးထက်မြတ်လှသော သူငယ်တော်သခင်ယေဇူး၏ နာရီပိုင်းနိုဗေနာ
(တစ်ရက်အတွင်း ၉ နာရီ ဆက်တိုက် တစ်နာရီလျှင် တစ်ကြိမ် ဆိုအပ်သော ဆုတောင်း ပတ္တနာ)
အို... သခင်ယေဇူးအရှင်မြတ်၊“တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်ရှာလျှင် တွေ့လိမ့်မည်၊ ခေါက်လျှင် ပွင့်လိမ့်မည်”ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည့် အတိုင်း ကျွန်ုပ်သည် သခင်ယေဇူး၏ မယ်တော် ကညာစင်မာရီယား၏ သန့်ရှင်းဖြူစင်သော နှလုံးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်ရာကို ပေးပါမည့်အကြောင်း ခေါက်ပါသည်၊ ရှာပါသည်၊ တောင်းလျှောက်ပါသည်။
(လိုအပ်သော ဆုကျေးဇူးကို တောင်းရန်)
အို.. ယေဇူးခရစ္ဆတူးသခင်၊ “ငါ၏ နာမတော်ဖြင့် အဖ ခမည်းတော်ထံ မည်သည့်အရာကို မဆို တောင်းလျှောက်လျင်ရပါလိမ့်မည်” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည့် အတိုင်း ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ အလွန်မွန်မြတ်သော မယ်တော်၏ ဆုပန်ကြားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်ရာကို ပေးပါမည့် အကြောင်း သခင်ယေဇူး သူငယ်နာမတော်အားဖြင့် အဖခမည်းတော်ထံရိုသေလေးစားစွာ အနူးအညွတ်တောင်းလျှောက်ပါသည်။
အို... ယေဇူး ခရစ္ဆတူးသခင်၊ “ကောင်းကင်ဘုံနှင့် မြေကြီးသည် ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း ငါ၏စကားမှာ ပျောက်ကွယ်မည်မဟုတ်ပါ။” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည့် အတိုင်းသခင် ယေဇူး၏ မယ်တော်ကညာစင် မာရီးယား၏ ပန်ကြားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်လိုအပ်သော ကျေးဇူးကို ကိုယ်တော်ပေးသနား တော်မူမည်ဟု ကျွန်ုပ်မြဲမြံစွာ ယုံကြည်စိတ်ချပါသည်။
စိန့်အန်ထော်နီအား ခိုကိုးခြင်း မေတ္တာ
အို... ဘုန်းဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်လှသော စိန့်အန်ထော်နီ၊ ဒုက္ခသည် အပေါင်းတို့၏ ခိုကိုးရာ၊ တန်ခိုးအာနုဘော်တော်အားဖြင့် ဗျာဒိတ်ပေးသည်မှာ အရှင်မြတ်အား ဆည်းကပ်၍ အကူအညီတောင်း သူတို့သည် အင်္ဂါနေ့ ၉ ရက်တိုင်တိုင် ဆက်၍ ကိုးပါက ၄င်းဆုကျေှးဇူးတော်ကို ခံစားရပါမည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အပြစ်ရှိသူ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဤကတိကို ယုံကြည်ကိုးစားသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော အသင်းတော်က အရှင်မြတ်၏ ရုပ်ပုံအား တင်မြှောက်ပသသည့် အတွက် အသင်းတော်နှင့် အတူ ၀မ်းမြောက်ရပါသည်။ အရှင်သူတော်သူမြတ်အား တောင်းလျှောက်သည်မှာ ကျွန်ုပ်အား ကူညီစောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ အကြံဥာဏ်ပေးတော်မူပါ။ ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ တောင်းလျှောက်ရာ ဆုကျေးဇူးသည် ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်၏ ကောင်းကျိုးနှင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ဆန့်ကျင်နေပါက ထိုက်သင့်သော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် ကျေးဇူးတော်များရရှိဖို့ စောင့်မပေးပါရန် ခရစ္ဆတူးသခင်ထံမှ တစ်ဆင့် တောင်းလျှောက်ပေးတော်မူပါ။
အို... သန့်ရှင်းသော စိန့်အန်ထော်နီ၊ အရှင်သူတော်သူမြတ်မှာ သဘောထား အသိမ်မွေ့အနူးညံဆုံး၊ ဘုရားသခင်အား ချစ်ကြည်ညိုသော ကောင်းမှု့ကုသိုလ်တော်၊ မြင့်မြတ်လှသောပါရမီများ လူသားအချင်းချင်းအပေါ် စေတနာထားရှိတတ်သော စိတ်စေတနာကြောင့် လောကတွင်နေခဲ့စဉ်က ထူးမြတ်သော တန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ထိုက်တန်ခဲ့ပေသည်။ တန်ခိုးအာနုဘော်တော်တို့မှာ အရှင်သူတော်သူမြတ် မိန့်မြွက်သည့် အတိုင်း ဖြစ်လာ၍ အရှင်သူတော်သူမြတ်မှာလည်း ဒုက္ခရောက်သူအပေါင်းတို့ကိုယ်စား တောင်းလျှောက်ပေးရန် အမြဲအသင့်ရှိနေပါသည်။ ခက်ခဲလှသော ဆုကျေးဇူးတို့ကို ကိုယ်တော်အား တောင်းလျှောက်ရာ အလဟသ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဖျားနာသူတို့အား ကျန်းမာစေပါသည်။ ပျောက်ဆုံးသော ပစည်းမားကို ပြန်တွေ့စေပါသည်။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေသူတို့မှာ အရှင်မြတ်ထံမှ သနားခြင်းခံရ၍ သေသူတို့ကိုပင် ပြန်လည်ရှင်သန် ထမြောက်စေသည်။ လောကတွင် နေခဲ့စဉ် ကာလအတွင်း အရှင်မြတ်အတွက် မဖြစ်နိုင်သည့် အရာမည်သည်မရှိပါ။ စိတ်ဒုက္ခ ဆင်းရဲ ရောက်နေသူတို့အား သနားကြင်နာခြင်းမမြဲရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ရုပ်ပုံတော်ရှေ့မှောက်တွင် ဒူးထောက်လျက် ယုံကြည်ခြင်း အပြည့်အ၀ဖြင့် ဤဆုကျေးဇူးတော်ကို တောင်းလျှောက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်လိုအပ်သော ဆုကျေးဇူးမှာ အရှင်မြတ်၏ အာနုဘော်တော်လိုအပ်ပါသည်။ အရှင်မြတ်သည် တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့် ပြည့်စုံသော သူတော်သူမြတ်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။ လောကတွင် နေစဉ်က တစ်ခွန်းမျှ မိန့်တော်မူလျှင် အကြီးမားဆုံးသော အံ့ဖွယ်ရာများပင် ဖြစ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။ အို... သိမ်မွေ့ ချစ်ဖွယ်ရာကောင်းသော စိန့်အန်ထော်နီ၊ စိတ်နှလုံးတွင် သနားကြင်နာခြင်း အမြဲရှိတတ်သည့် အလျောက် ကိုယ်တော်၏ ရင်ခွင်တွင် အမြဲ ပွေ့ပိုက်ထားသော သူငယ်တော် ယေဇူးသခင်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ တောင်းလျှောက်ရာကို တင်ပြတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ တစ်ခွန်းတည်းသော တောင်းလျှောက်ရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ လိုအပ်သော ကျေးဇူးကို ရစေနိုင်ပါမည်။ ထိုစကားတစ်ခွန်းတည်းဖြင့် တောင်းလျှောက်ပေးပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် အရှင်မြတ်အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
(ကောင်းကင်ဘုံ၌၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်)
အို .... အဘမြတ်စွာဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ တရားတော်ကို သက်သေခံသူ သူတော်သူမြတ် စိန့်အန်ထော်နီထံ ဆည်းကပ်ခြင်း အခမ်းအနားသည် ကိုယ်တော်၏ အသင်းတော်ကို ၀မ်းမြောက်စေခြင်း အကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါ။ အသင်းတော်အားလည်း ၀ိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် ထာဝရသုခ ချမ်းသာကို ရရှိရန် လိုအပ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု့များဖြင့် အစဉ်မပြတ် ဖြင့်တင်းပေးပါမည့် အကြောင်း သားတော် ယေဇူးခရစ္ဆတူးအားဖြင့် တောင်းလျှောက်ပါသည် အဘဘုရား။ အာမင်။
သူတော်သူမြတ် စိန့်မာရ်တား၊ ကျွန်ုပ်သည် အရှင်၏ စောင့်ရှောက်စောင်မမှုကို ခံယူရန် ရောက်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ချစ်လေးမြတ်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို ပြလိုသည့် သဘောဖြင့် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ဖယောင်းတိုင်မီး ပူဇော်ပါသည်။ ကယ်တင်ရှင်ယေဇူးသည် အရှင်မြတ်အိမ်တွင် တည်းခိုစဉ်က ခံစားခဲ့သည့် ကျေးဇူးဖြင့် အကျွန်ုပ်ခံစားရသည့် အခက်အခဲများတွင် အကျွန်ုပ်ကို နှစ်သိမ့်တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်၏ မိသားစုတစ်ခုလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို အမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးစိတ်ဝိညာဉ်တွင် သိမ်းသွင်းထားနိုင်ရန် စောင်မတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှ အားလုံးကို အစဉ်အမြဲတောင်းလျှောက် ပေးသနားတော်မူပါ။
(လိုအပ်သော ကျေးဇူးများကို တောင်းရန်)
အရှင်သူတော်သူမြတ်၏ ခြေရင်း နဂါး၏ရန်ကို ပယ်ဖျက်သည့်အတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံရသော ဒုက္ခအခက်အခဲများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်ရအောင် စောင်မတော်မူပါ။ အာမင်။
(ကောင်းကင်ဘုံ၌ အာဝေမာရီယား၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်)
(ဤသူတော် သူမြတ်အား အင်္ဂါနေ့တိုင်း ဖယောင်းတိုင်မီးပူဇော်၍ ၉ ကြိမ်ကိုးပါက ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိလျှင် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။ ဤသူတော်သူမြတ်အား ခိုကိုးခြင်းကို ပြန့်ပွားစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် မေတ္တာစာကို ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။)
စိန့်ဂျိုးဇက်အား ခိုကိုးခြင်း မေတ္တာ
အို ဘုန်းတော်ကြီးလှသော သူတော်သူမြတ် စိန့်ဂျိုးဇက်၊ အရှင်မြတ်သည် ယေဇူးခရစ္ဆတူး၏ သစ္စာရှိသော အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပါသည်။ ယေဇူး၏ ရွှေနှလုံးတော်ရှေ့မှောက်တွင် အရှင်မြတ်တောင်းလျှောက်သမျှသည် အစွမ်းထက်လှသည်ဖြစ်၍ ၀ိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ကာယရေးဆိုင်ရာလိုအပ်သမျှ ကျေးဇူးအဖြာဖြာတို့ကို တောင်းလျှောက်ပေးပါမည့်အကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ကောင်းသောသေခြင်းဖြင့် သေနိုင်ရန် ယခုတောင်းလျှောက်မည့် ဆုကျေးဇူးကို ရယူပေးပါမည့်အကြောင်း တောင်းပန်ပါသည်။
လူအဖြစ်ကို ယူတော်မူသော ယေဇူးသခင်၏ အုပ်ထိန်းသူအရှင် သူတော်သူမြတ်၏ မေတ္တာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်သော ဆုကျေးဇူးမှာ ဘုရားသခင်၏ ပလင်တော်ရှေ့တွင် မျက်နှာရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အို ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်လှသော သူတော်သူမြတ် စိန့်ဂျိုးဇက်၊ သခင်ယေဇူး ခရစ္ဆတူး၏ ဘုန်းဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်လှသော နာမတော်အား ချစ်လေးမြတ်သည့် သဘောဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်ရာကို ရယူပေးသနားတော်မူပါ။
အို ဘုန်းဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်လှသော စိန့်ဂျိုးဇက်၊ သီလှရှင် မြတ်သခင်မ၏ ခင်ပွန်းတော်၊ အကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းဖြူစင်နှိမ့်ချတတ်သော၊ စေတနာထားတတ်သော စိတ်နှလုံးထားနှင့် ထာဝရဘုရားရှင်၏ အလိုတော်ကို လုံးဝခံယူလိုသော စိတ်ဆန္ဒကို ပေးတော်မူ၍ အရှင်မြတ်စိန့်ဂျိုးဇက်ရရှိခဲ့သော ကျေးဇူးမျိုးဖြစ်သည့် သခင်ယေဇူးနှင့် မယ်တော်မာရီယား လက်ဝယ်သေရသော သေခြင်းမျိုးကို ရလိုပါသည်။ အသနားခံပေးတော်မူပါအရှင်။ အာမင်။
(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များနှင့် မတ်လအတွင်းတွင် ဆိုနိုင်၍ ပွဲနေ့မှာ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ ဤမေတ္တာဖြင့် အထူး ကျေးဇူးတော်များ ရရှိနိုင် ပါသည်။)
စိန့်ထရေဇားအား ခိုကိုးခြင်း မေတ္တာ
“သင်တို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ဤသူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံကဲ့သို့ မ၀င်ရကြ” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သော အိုသခင်ဘုရား။ ထာဝရသုခချမ်းသာသို့ရောက် နိုင်အောင် ကညာစင် စိန့်ထရေဇားကဲ့သို့ ရိုးသားဖြူစင်သော စိတ်နှလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသနားပါရန် တောင်းလျှောက်ပါသည်။ အစဉ်ထာဝရတည် ခမည်းတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနှင့် တပေါင်းတစုတည်း အသက်ရှင်တော်မူ စိုးစံတော်မူသော အရှင်မြတ်ဘုရား။ အာမင်။
(ကောင်းကင်ဘုံ၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊)
အို မြတ်လှသော နှင်းဆီပန်းမင်းသမီးတော်၊ အရှင်မြတ်အား တောင်းလျှောက်သော မည်သည့်အရာကို မဆို စောင်မခြင်းပြုပါမည်ဟု မိန့်၊မြွက်ဖူးသည်ကို သတိရတော်မူပါ။ သခင်ယေဇူး၏ ရွှေနှလုံးတော်မြတ် အရှင်မြတ်ရှိသော တန်ခိုးကို ယုံကြည်အားကိုးပါသောကြောင့် အကျွန်ုပ်အလွန် လိုအပ် တောင့်တနေသော ဆိုကျေးဇူးနှင်းဆီပွင့်ကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်စား ဆွတ်ခူးပေပါမည့် အကြောင်း တောင်းပန်ပါသည်။
သခင်ယေဇူး၏ ရွှေနှလုံးတော်ကို ခိုကိုးခြင်း မေတ္တာ
ကောင်းချီး မင်္ဂလာ အဖြာဖြာတို့၏ မူလရင်းဖြစ်တော်မူသော အို.. ယေဇူး၏ ရွှေနှလုံးတော်၊ အကျွန်ုပ်သည် သခင်ဘုရားကို လေးစားချစ်ခင် မြတ်နိုးပါသည်။ အကျွန်ုပ်ပြုမိသော အပြစ်များအတွက် ကြီးစွာသော နောင်တဖြင့် ကျွန်ုပ်၏နှလုံးကို ပူဇော်ပါသည်။ သခင်ဘုရား၏ အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်အား နှိမ့်ချခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းကို ပေးသနားတော်မူပါ။ သခင်ဘုရား၌ သခင်ဘုရားအတွက်သာလျှင် အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ပါရစေ။ ဘေးဥပဒ်၊ ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှ ကာကွယ်တော်မူပါ။ သောကအမျိုးမျိုးရှိလျှင် နှစ်သိမ့်တော်မူပါ။ လောကတွင်လိုအပ်သည့် ကိုယ်၏ ကျန်းမာရေးနှုင့် နေ့စဉ်လိုအပ်ရာများကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ပြုလုပ်သမျှ အရာရာတိုင်းကို ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ ကောင်းသောသေခြင်းဖြင့် သေရသော ကျေးဇူးကို ပေးသနားတော်မူပါ ဘုရား။ အာမင်။
အစဉ် ကူညီစောင်မသော မယ်တော်အား ခိုကိုးခြင်း မေတ္တာ
အို... အစဉ် ကူညီစောင်မသော မြတ်မယ်တော်၏ သန့်ရှင်းသော ပုံတော်ရှေ့ဝယ် ဆုကျေးဇူးတောင်းလျှောက်သူများဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲမပြတ် ၀ိုင်းဝန်းလျက် အသနားခံကြပါသည်။ စိတ်ဆင်းရဲ ၀မ်းနည်းသူတို့ကို စောင်မတော်မူသော သခင်မ အဖြစ်ကောင်းချီးပေးကြပါသည်။ မိခင်ကဲ့သို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ ယုံကြည်ခြင်း အပြည့်အ၀ဖြင့် စိတ်နှလုံးကြေကွဲဝမ်းနည်းသည့်အတွက် မယ်တော်၏ ရှေ့မှောက်သို့ ကျွန်ုပ်တို့လာရောက်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသည့် မကောင်းမှုကို ကြည့်တော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှတို့မှာ များပြားလှပါသည်။ ဒုက္ခဆင်းရဲ အခက်အခဲတို့သည် ကျွန်ုပ်အား စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းစေပါသည်။ ဒုက္ခအပေါင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်ထောင်စုကို စိတ်အားငယ်စေပါသည်။ နေရာတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ကြုံတွေ့ရပါသည်။ သနားကြင်နာတတ်သော မယ်တော်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုတို့ကို ကြင်နာသနားတော်မူပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လောလောဆယ် လိုအပ်ရာကို ပေးသနားတော်မူပါ။
အို မယ်တော်မြတ် ကျွန်ုပ်ကို ကူညီတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်ကို စိတ်အားငယ်ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုဟူသမျှတို့မှ ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်ဆက်လက် ဒုက္ခခံစားရပါမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်အား ချစ်ခင်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးကို ပေးတော်မူပါ၊ ဆုတောင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်း အပြည့်အ၀ ဖြင့်တောင်းလျှောက်ပါသည်။ မယ်တော်သည် အစဉ်အမြဲကူညီစောင်မသော မယ်တော်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အာမင်။
သခင်ယေဇူးခရစ္ဆတူး ဒုက္ခစရိယာ ကျင့်ခံတော်မူသောလမ်းတည်း
အို.. ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ခြေရင်း၌ ညွှတ်ပျပ်ဝပ်တွား လျက်ရှိ၍၊ အသနားတော်မြတ်ကို ခံလိုသော အကျွန်ပ်တို့အား လည်းကောင်း၊ သေလွန်ကုန်သော ခရစ္ဆတီအန်တို့အားလည်းကောင်း၊ ကယ်မသနားတော်မူပါ။ ယခုဆဲဆဲ အောင့်မေ့ဆင်ခြင် ရှေးရှုပါအံ့သော ကိုယ်တော်၏ ဒုက္ခစရိယာမှ မဟာကုသိုလ်တော် အကျိုးဆက်ကို၊ အကျွန်ပ်တို့က ခံစားကြပါစေသောဝ်၊ နောက်တော်သို့လိုက်၍၊ ဒုက္ခစရိယာကို မျက်မှောက်ပြုကြရာ၊ ကြီးစွာသော သံဝေဂစွဲ၍၊ ဤအသက်အတွင်း အချွတ်တွေ့ကြုံရသော ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်၊ နှိမ့်ချ ရှုတ်ချရာကို အသင့်ရိုသေသောသဘောဖြင့် သည်းခံနိုင်ပါမည် အကြောင်းအား တန်ခိုးပေးသနားတော်မူပါ။
• အို … ခရစ္စတူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ရှိခိုးကိုးကွယ်၍ ချီးမွမ်းထောပနာ ပြုကြပါသည်။
• အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် ကရူစူး အာနုဘော်အားဖြင့် လူအပေါင်း တို့ကိုကယ်ချွတ်တော်မူခဲ့ပေပြီ။
သေစေဟူ၍ သခင်ယေဇူးသည် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို ခံတော်မူရာ အရပ်
မဟာယေဇူးသည် ကာဣဖါ အမည်ရှိသော ရဟန်းပရောဟိတ် ကျောင်းတွင် လည်းကောင်း၊ ဟေရုဒ်အမည်ရှိသော မင်းအိမ်တွင် လည်းကောင်း ကဲ့ရဲ့ခနဲ့မထီလေးစားပြုခြင်းခံရာမှ၊ ဆင်းလာတော်မူလျှင် ပီလာတူးမင်းရုံးတော်သို့ ဆွဲငင် တွန်းထိုးပို့ယူကြကုန်၏။ အသားအရေ စုတ်ပဲ့ အောင် ရိုက်နက်ကုန်၏။ ဆူးခွေဖြင့်ပြီးသော ဦးဗောင်းကို ကိုယ်တော်မြတ် ခေါင်းတော်ပေါ်မှာ၊ စွပ်နက်ကြကုန် ၏။ ကမ္ဘာကုန်လျှင် မလွဲသက်ရှိသက်မဲ့ လူအပေါင်း တို့ကို၊ စီရင် စစ်ကြောတော်မူအံ့သော ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်မြတ် သည် သေစေဟူ၍ အသရေ မဲ့သူကဲ့သို့ စီရင်ချက်ကိုခံချေသည်တကား...
မွန်မြတ်လှသော ယေဇူးသခင် အကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စားဝင်၍ ဒုက္ခစရိယာ ကို ခံတော်မူသည် မှန်ပေ၏။ အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်ချွတ်ခြင်းငှာ၊ သေစေ ဟူ၍ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုလည်း ခံတော်မူသည် မှန်ပေ၏။
အို... ချစ်ဖွယ်လှသော သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့ ပြုမိသမျှအပြစ်ကို စိတ်ကုန်၊ ဥာဏ်ကုန်၊ အားနှင့်အမျှ စက်ဆုပ်ရွံရှာကြသည် ဖြစ်၍ အသနားတော် မြတ်ကိုခံသဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကို ရပါမည့် အကြောင်း၊ တောင်း လျှောက် ကြပါ၏။
(ကောင်ကင်ဘုံ၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်၊ ခမည်းတော်... )
• အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မ သနားတော်မူပါသခင်။
• အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မ သနားတော်မူပါ။
• သေလွန်သော သူတို့၏ အသက်ဝိညာဉ်တို့သည် အသနားတော်မြတ်ခံရ၍ ငြိမ်သက် ချမ်းသာစွာရှိစေသော်။ အာမင်။
စိတ်ဒုက္ခ နှင့် ပြည့်စုံမယ်တော်
သခင်ယေဇူးသည် ကရူစူးကို ထမ်းယူတော်မူသည့် အရပ်
လွတ်လပ်ရာမရှိ တစ်ကိုယ်လုံးဒဏ်ရာနှုင့် ပြည့်ငြား သော်လည်း ကိုယ်တော်၏ ပုခုံးပေါ်မှာ အလွန်လေးသော ကရူစူးကိုတင်ကြ၏။ ကိုယ်တော်မြတ်မူကား နှုးညံ့ သိမ်မွေ့သော စိတ်နှင့် ထိုကြီးမားသော ကရူစူးကို ခံယူတော်မူသည် သာမက ထိုကရူစူး၌ သတ်ထားခြင်းကို ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ကယ်ချွတ် တော်မူမည် အလိုတော်ရင်းရှိသောကြောင့် အားရ လှသောစိတ်နှင့် ထိုကရူစူးကို ခံယူတော်မူသတည်း။
အကျွန်ုပ်တို့ အသနားတော်မြတ်ခံပါသည် အသက်မကွာ ကြုံမြဲ ဒုက္ခ ဆင်းရဲကို သိမ်မွေ့နှိမ့်ချရိုသေစွာ သည်းခံ၍ နောက်တော်ကို အားမလျော့ ရဲရဲလိုက်လိုသော စေတနာစိတ်ကို ဒုက္ခစရိယာ မဟာ ကုသိုလ်တော်ကို ထောက်တော်မူ၍ ပေးသွင်း တော် မူပါ၊ ယေဇူး အကျွန်ုပ်တို့သခင် ။
• သေလွန်သော သူတို့၏ အသက်ဝိညာဉ်တို့သည် အသနားတော်မြတ်ခံရ၍ ငြိမ်သက်ချမ်းသာစွာရှိစေသော်။ အာမင်။
သခင်ယေဇူးသည် ကရူစူးကို ထမ်းရာတွင် ပထမတစ်ကြိမ် လဲတော်မူသည့် အရပ်
ကိုယ်တော်သည် အလွန်လေးသော ကရူစူးအောက်မှာ ကုန်း၍ ဟိုက်လျက်ရှိတော်မူသည် တကား။ ကာလ’ာဝါရီ တောင်ထက်သို့ ရွှေစက်တော် ပြောင်းစပြု၍ ယုတ်မာသောသူတို့၏ အပြုအမူ နှုတ်ကျူး လက်ကျူးမှု များကို သည်းခံတော်မူသည်။ သံလွင်ဥယျာဉ်တွင် ခံတော်မူခဲ့သော ဝေဒနာကြောင့် မောပန်းခြင်း အားကြီး လှ၍ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် အပြည့်ရှိတော်မူသည်။ ခွန်အား နည်းပါး၍ ကရူစူး အောက် မြေပေါ်မှာလဲ တော်မူသည်။
အကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များကြောင့် အလွန်လေးသော ကရူစူးကို ထမ်းယူ တော်မူစဉ်တွင် ထိုကရူစူးအောက်၌ လဲတော်မူသော အို.. ယေဇူးသခင်၊ ကိုယ်တော်ကျင့်ခံတော်မူသော ဒုက္ခစရိယာကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့သဖြင့် သမ္မာသတ္တိ သမ္မာဝီရိယနှင့် ကိုယ်စိတ်နှလုံးတို့ကို စောင့်စည်း ချုပ်တည်း ၍ မကောင်းရှိသမျှကို ကြည်ရှောင်နိုင်ပါမည့်အကြောင်း အားတန်ခိုး ပေးသွင်းတော် မူပါ။
သခင်ယေဇူးသည် မယ်တော်နှင့်လမ်းတွင် တွေ့ကြုံတော်မူသည့် အရပ်
သခင်ယေဇူးသည် ကရူစူးကို ထမ်းတော်မူလျက် လဲသောကြောင့် ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် အနာအဆာထ၍ ၀ဒနာကြီးပြင်လှ၏။ ရှေ့တိုး၍ ရွှေစက်တော် ပြောင်း တ်ာမျှူင် မယ်တော်နှင့်လမ်းတွင် တွေ့ကြုံ တော်မူ၏။ ဤတွေ့ကြုံခြင်းကား၊ အဘယ်သို့သော တွေ့ကြုံ ခင်းနည်း။ သန်လျက်နှင့်တူ၍ မယ်တော်၏ နှလုံးတော်ို ထိုးဖောက်သော နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို မည်သို့အား ဖင့် ဆင်ခြင်၍ ပြပါမည်နည်း။ သားတော်လည်း မိမိ၏ မယ်တော်၏ ပူဆွေး နာကျင်ခြင်းကို မြင်တော်မူလျှင် ရွှေနှလုံးတော်၌ ဖြစ်ရာကို မည်သူ အောက်မေ့ ဆင်ခြင်နိုင် ပါမည်နည်း။
အို.. ယေဇူးသခင် ကိုယ်တော်၏မယ်တော်၌ သက်တော်မူသည် ကြင်နာသနားခြင်းကို ထောက်တော်မူ၍ အကျွန်ုပ်တို့အား သနားတော် မူပါ။ ပူဆွေးနာကျင်လှသော အိုမယ်တော် မာရီယား၊ သားတော်သည် ကျင့်ခံတော်မူသော ဒုက္ခစရိယာကိုထောက်၍ အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှာ ထပ်ဆင့် ဆုတောင်းတော်မူသဖြင့်၊ အဆုံးစွန်သောနေ့၌ အမျက်တော် နှင့် ကင်းလွတ်ကြနိုင်မည့်အကြောင်း မစတော်မူပါ။
အာဏာသားတို့သည် ဆီမုန် ဆီရေနေဦးကို သခင်ယေဇူးကိုယ်စား ကရူစူးကို ၀င်၍ထမ်းစေသည့်အရပ်
ကိုယ်တော်၌ ခွန်အားကုန်၍ရှေ့သို့ ရွှေစက်ကို ပြောင်း တော်မူနိုင်သောကြောင့် အာဏာသား သူယုတ်တို့ သည် ဆီမုန် ဆီရေနေဦး မည်သော သူကိုအနိုင်အထက်ပြု၍ သခင်ယေဇူး ကိုယ်စား ကရူစူးကို ထမ်းစေကုန်၏။ ဆီမုန်ဆီရေနေဦးသော်ကား ကရူစူး အာနုဘော်ကြောင့် စိတ်ထားရင်းလည်း ပြောင်း၍ တပုံတခြားဖြစ်လာလျှင် ရှေ့လက်ဦး မနှစ်သက် မခံလိုသောအရာကို နောက်ကို စိတ်ပါ ကိုယ်ရောက် ၀မ်းသာစွာ ထမ်းယူလေ၏။
အို.. ယေဇူးသခင် ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ကရူစူးထမ်းရပါ မည့်အကြောင်း ကရူစူးထမ်းခြင်း၌ သာလျှင် အကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ဖော်ကြပါမည့်အကြောင်း ကရုစူး အာနုဘော် တော်အားဖြင့် လောကီသားတို့ နှစ်သက်ရာကိုမလိုက် စွန့်ပစ်နိုင်မည့် အကြောင်း သခင်၏ နာမတော် မြတ်ကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တိုင်း ကျေးဇူးတော်ထင်မှတ်၍ မတွန့်မတိုဘဲ ၀မ်းသာ ၀မ်းမြောက်ခြင်းနှင့် သည်းခံနိုင်ပါမည်အကြောင်း အားတန်ခိုး ပေးသွင်းတော်မူပါ၊ သခင်။
ဝေရောနိကာအမည်ရှိသော မိန်းမတစ်ယောက်သည် သခင်ယေဇူး၏ မျက်နှာတော်ကို ပ၀ါနှင့်သုတ်သည့်အရပ်
ရွှေမျက်နှာတော်၌ ချွေးစီးယို၍ ကိုယ်တော်သည် ရှေ့သို့ကြွ လျှောက်တော်မူလျှင် မိန်းမတစ်ယောက် သည် ကြင်နာသနားခြင်း စိတ်စွဲ၍ ငယ်သားအစုထဲသို့ ၀င်သဖြင့် ရွှေမျက်နှာကိုပ၀ါဖြင့်သုတ်လေ၏ ထိုမိန်းမပြု မိသော ကျေးဇူးကောင်းမှုကို သိတော်မူ၍ဆပ်တော်မူ ချင်သော ရွှေစိတ်တော် ရှိတော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ရွှေမျက်နှာတော်ပုံကို ပ၀ါပေါ်၌ ကပ်စွဲစေ တော်မူသတည်း။
အို ယေဇူးသခင် ကိုယ်တော်၏ဒုက္ခစရိယာကို ရှေ့ရှုထောက်မျှော် ဆင်ခြင်သဖြင့် အလွန်ရိုသေကြင်နာတတ်သော စိတ် ကျူးလွန်မိသော အပြစ်များကြောင့် ပြင်းထန်သော နာကျင်ခြင်းစိတ် ဆပွား တိုးတတ်သော သဒ္ဒါ မြတ်နိုးခြင်းစိတ် ဤစိတ်သုံးပါးကို အကျွန်ုပ်တို့၌ အမြဲစွဲအောင် ကယ်မတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တို့သည် အရှင်သခင်နှင့် တူပါအံ့သည် တိုင်အောင်သခင်၏ အသွင် ရွှေပုံတော်ကို အကျွန်ုပ်တို့၏ နာမ်ဝိညာဉ်၌ ကပ်ရိုက် စွဲစေတော်မူပါ။
သခင်ယေဇူးသည် နှစ်ကြိမ်မြောက်မြေပေါ်မှာ လဲတော်မူသည့်အရပ်
ကိုယ်တော်သည် အရိုက်အနက် ဆင်းရဲအမျိုးစုံခံခြင်း ကြာင့် တစ်ချက်၊ သွေးယိုစီးခြင်းကြောင့် တစ်သွယ်၊ ခွန်အားနည်းပါး၍ မြေပေါ်မှာ နှစ်ကြိမ်မြောက် လဲတော်မူ၏။
အို ယေဇူးသခင် ကိုယ်တော်ခံတော်မူသည့် ဒုက္ခ အာက်မှာ လည်းကောင်း အကျွန်ုပ်တို့ ပြစ်ဒုစရိုက် အလွန်လေးသော ၀န်အောက်မှာ လည်းကောင်း လဲတော်မူသည်။ တရားတော်ကို ပြစ်မှားကျူးလွန်သဖြင့် အထပ်ထပ် ကြိမ်ကြိမ် ရွှေနှလုံးတော်ကို နာကျင်အောင် ပြုမိပါပြီ။
အို.. သခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်၍ အပြစ်မကောင်းမှုကို ပြုရအံ့လျှင် ယခုပင်မချွတ် အသက်အသေခံပါစေသောဝ်
ယေရုဇလင်မြို့ မိန်းမတို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်၍ သခင်ယေဇူးအတွက်ကြောင့် ငိုကြွေးကြသည့်အရပ်
ယေရုဇလင်မြို့သူမြို့သားတို့တွင် အချို့သော မိန်းမ တို့သည် အရိုက် အနှက် အပူအပန်းခံသော ယေဇူကို ဖူးမြင်ရလျှင် ကြင်နာခြင်းစိတ် အထူးသဖြင့်သက်၍ ငိုကြွေးညည်းတွားကြ၏။ မြို့တော်ကြီး အပေါ်မှာ မကြာဆဲဆဲရောက်ရအံ့သော ဘေးဒဏ်ကို မြော်မြင် တော်မူလျှင် ထိုမွန်မြတ်သော မိန်းမများဘက်သို့ ရွှေမျက်နှာတော် လှည့်တော်မူ၍ သမီးများတို့ ငါ့ အတွက်ကြောင့် မငိုကြွေးကြနှင့် သင်တို့အဖို့ သင်တို့၏ သားသမီးတို့အဖို့ ငိုကြွေးကြလော့ဟု ဗျာဒိတ်တော် ရှိ၏။
အကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ပါသည် ကိုယ်တော် ခံတော်မူ သော မဟာဒုက္ခ အကြောင်းရင်းကား အကျွန်ုပ်တို့ပင် ဖြစ်သည်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့လျှင် သြော် – အရှင်သခင်၊ နာကျင်လှ၍ ငိုကြွေး ကြပါ၏။
ဤ ယခုမျက်မှောက်ဘ၀ ကိုယ်တော်ကို ပစ်ပယ်သော သူတို့ခံရအံ့ သောဒဏ်မှ အကျွန်ုပ်တို့ ကင်းလွတ်၍နောင်ဘ၀ အခွင့်ချမ်းသာကို ခံထိုက်ရအောင် ငိုကြွေးခြင်း သံဝေဂစိတ်ကို အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မ၍ ပေးသွင်းတော်မူပါ။
သုံးကြိမ်မြောက် မြေပေါ်မှာ လဲတော်မူသည့်အရပ်
ကိုယ်တော်မြတ်သည် ကာလလ၀ါရီတောင်ပေါ်သို့ ရောက်လှပြီ။ ကရုစူး တံကျင်၌ သတ်ထားခြင်းကို ခံတော်မူအံသော အရပ်သို့ ရောက်တော်မမူမီ အားကုန်သောကြောင့် သုံးကြိမ်မြောက်လဲတော် မူလေ၏။ ဤသို့လဲတော်မူ သော်လည်း အာဏာသား သူယုတ် တို့သည် အသနားမဲ့ ရက်စက်သောစိတ်ဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကို တွန်းထိုး ဆွဲငင်အပူတပြင်း ရိုက် သေးသတည်း။
အို.. ယေဇူး၊ အကျွန်ုပ်တို့သခင် နာကျင်လှသော သုံးကြိမ်မြောက် အောင်လဲတော်မူသည် အခြင်းအရာမဟာ ကုသိုလ်တော်ကို ထောက်၍ အကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန်ပြစ်မှားမိသမျှကို လည်းကောင်း အကျွန်ုပ်တို့ အမိုက်မှားရာ၌ ကြာမြင့်စွာနေမိသည်ကို လည်းကောင်း ခွင့်လွှတ်တော် မူပါ။ ထိုမှတစ်ပါး ကိုယ်တော်ခံ တော်မူသည့် အံ့ဖွယ်သောဒုက္ခကို အောက်မေ့သဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန် မိသမျှကိုတိုး၍ တစ်နေ့တခြား ရွံရှာမုန်းနိုင်အောင် ကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနား တော်မူပါ။
သခင်ယေဇူး၏ ၀တ်လုံတော်ကို ချွတ်ခွာကြသည့်အရပ်
အသက်တော်စွန့်၍ ပူဇော်တော်မူအံ့သော အရပ်သို့ ရောက်တော်မူလျှင် အာဏာသားတို့သည် သခင် ယေဇူးကို တံကျင်၌ ရိုက်ထားကြအံ့ဟူ၍ အစပြုကြ ကုန်၏။ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မှ၊ ယိုစီးသော အသွေးအား ဖြင့် အသားအရေကို ကပ်လျက်နေသော အ၀တ်စုကို ဆွဲငင်ချွတ်ခွာကြသည် ဖြစ်၍ အလွန် စင်ကြယ် တော်မူသော ကိုယ်တော်သည် မတ်တက်ကြည့် နေသော သူအပေါင်း တို့၏ ရှုတ်ချ ကဲ့ရဲ့ ပြုခြင်းတို့ကို ခံတော်မူ၏။
အို... သိမ်မွေ့နူးညံလှသောသခင် ကျွန်ုပ်တို့မကောင်းသော အပြုအမူ များကြောင့် အလွန်ရှက်ဖွယ်သော အခြင်းအရာကို ကျင့်ခံ တော်မူပေ သည် လောကီသားတို့၏ မျက်နှာကို ထောက်စာ တတ်သောစိတ်၊ ထောင်လွှားတတ်သောစိတ် မာန်မာနစိတ်များကို အကျွန်ုပ်တို့မှ ပယ်ရှား တော်မူပါ။ နောင်ဘ၀မှာ ကြောက်မက်ဖွယ်သော ဘေးဒဏ်မှ ကင်းလွတ် နိုင်မည့်အကြောင်း ယခုဘ၀မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို နှိမ့်ချ ချုပ်တည်း နိုင်အောင် အကျွန်ုပ်တို့အား အားတန်ခိုး ပေးသနားတော်မူပါ။
သံမယ်နနှင့် ကရူစူးတံကျင်ပေါ်မှာ လက်ဖ၀ါး ခြေဖ၀ါးတော်တို့ကို ရိုက်ထားကြသည့်အရပ်
သည်အရပ်မှာ အာဏာသားတို့သည် ကရုစူးတံကျင်ကို မြေ၌ ချထား၍ ချည်နှောင်ကြ၏။ ထိုသောအခါ ကိုယ်တော်မြတ်သည် လူအပေါင်းတို့ အတွက်ကြောင့် ဒဏ်ရာနှင့်ပြည့်သော မိမိ ကိုယ်တော်ကို ဘုရားသခင်အား ပူဇော်တော်မူ၏။ ပူဇော်တော်မူပြီးလျှင် အသက်တော် အသေခံ တော်မူမည့်အကြောင်း သူသတ်တို့လည်း လက်ဖ၀ါး ခြေဖ၀ါးတော်တို့၌ ကြီးသော သံမှိုကို ရိုက်နှက်ကြ သတည်း။ အသွေးတော် အလိမ့်လိမ့် ယိုစီးလေသည် တကား။
တံကျင်ပေါ်မှာ တွဲလွဲနေတော်မူသော အိုယေဇူးသခင် ကိုယ်တော်၏ ကရူစူးခြေရင်း၌ မကွာစိတ်နှလုံးဖြင့် အမြဲမကွာ တွယ်ကပ်အောင် ကယ်မ တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်နှင့် အသက်ထက်ဆုံး ပေါင်းယှက် လျက်နေပြီးမှ အကျွန်ုပ်တို့ နာမ်ဝိညာဉ်ကို ရွှေလက်တော်၌ အပ်နှံရပါမည့် ကျေးဇူးတော်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါ။
သခင်ယေဇူးသည် ကရူစူးပေါ်မှာ အသက်တော်ကို
သခင်ယေဇူးသည် သံစွဲရာလက်နှစ်ဘက်တို့ဖြင့် ၃ နာရီတိုင်အောင် ကရူစူး၌ တွဲလွဲနေတော်မူခဲ့ပြီ အသွေးတော်သည် ပန်း၍ ယိုစီးသဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး၌ သွေးချောင်း အပြည့်ရှိ၍ မြေကြီးပေါ်မှာလည်း အနှံအပြားရှိ၏။ အတိုင်း မသိသော ဒုက္ခကို ခံတော်မူရာတွင် သူသတ်တို့ အပေါ်မှာ ဆုတောင်းတော်မူခဲ့ပြီ စိတ်ကောင်းသွင်းမိ၍ အတူခံရသော သူခိုးတစ်ယောက်ကို အသက်ရှင်ခြင်း ချမ်းသာကို ကတိထားတော်မူလျက် မယ်တော်ကို ချစ်သော တပည့်တော်အား အပ်လိုက်တော်မူ၍ယခု ခပ်သိမ်းသောအရာ အချက်ပြည့်စုံပါပြီဟု မြွက်တော်မူပြီးမှ ဦးညွှတ်တော်မူ၍ အသက်တော်စွန့်လိုက်တော်မူ၏။
အသက်တော်ကို မငဲ့ကွက်ဘဲ ကရူစူးအပေါ်မှာ သေသည်တိုင်အောင် အကျွန်ုပ်တို့ကို နှစ်သက် နှမြောတော်မူပေသော အိုချစ်ဖွယ်သော ယေဇူးသခင် ထိုကရုစူးကို ရိုသေစွာ အကျွန်ုပ်တို့ ပွေ့ပိုက်ကြပါ၏။ ထိုသေခြင်းအကျိုးကို အကျွန်ုပ်တို့ ထင်စား ခိုလှုံအမှီပြုကြပါ၏။ ရှင်သော်လည်းကောင်း သေသော်လည်းကောင်း အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၌ တည်နေလိုကြပါသည် ဖြစ်စေ သောဝ်။
အလောင်းတော်ကို ကရူစူးပေါ်ကချ၍ မယ်တော့်ရင်ခွင်ပေါ်မှာတင်ထားကြသည့်အရပ်
ငယ်သားအစုသည် ကလ’၀ါရီတောင်ပေါ်က ဆင်းကြ ကုန်ပြီ ညှိုးငယ်ပူးဆွေး နာကျင်လှသော မယ်တော်၏ စိတ်ကို နှစ်သိမ့် စေခြင်ငှာ အထူးချစ်တော်မူသော တပည့်တော်လည်း ယေရုဇလင်မြို့ သမီးသူတော်မများ နှင့်သာ ကျန်ရစ်ကြ ကုန်၏။ အာရိမာတေယုမြို့သား ဇူဇယ်နှင့် နိုကော်ဒေမူး နှစ်ယောက်တို့သည် လာ၍ ကရုစူးပေါ်က ချပြီးလျှင် အလောင်းတော်ကို မယ်တော် သခင်မ အားအပ်၍ ရင်ခွင်ပေါ်မှာ တင်ထားကြ၏။
အထူး အလွန်ပူပန်ပူဆွေး ညှိုးငယ်သော သြော်မွန်မြတ်သော မယ်တော် သခင်မ ခံရသောပူပန်ခြင်း ဒုက္ခကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကို အပြစ်ရှိသောသူ အကျွန်ုပ်တို့အား အမျှဝေတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံး ဆင်းရဲ နွမ်းရိခြင်းအဖြစ်ကို ထောက်တော်မမူပါနှင့် တပည့်တော်ကြီး ဇွင်နှင့်မခြား အကျွန်ုပ်တို့ကို သခင်မသားကဲ့သို့ မှတ်တော်မူပါ အကျွန်ုပ်တို့၌ မယ်တော်ပြုတော်မူပါ။ သခင်မသားတော်ယေဇူး ဘုရားသည် အကျွန်ုပ် တို့ ဆုတောင်းသံကို ရွှေနားတော် ယူတော်မူပါသည် ဖြစ်စေသောဝ်။
တပည့်တော်တို့နှင့် မိတ်ဆွေတော်တို့သည် သခင် ယေဇူး၏ အလောင်းတော်ကို အသစ်ဖြစ်သော ကျောက်ခေါင်းတစ်ခု၌ ချထားပြီးလျှင် သင်္ချိုင်းအ၀ကို အလုံးကြီးလှသော ကျောက်တစ်ခုနှင့် ဖုံးပိတ်ကြကုန်၏။ အလောင်းတော်သည် မိမိတန်ခိုးတော်အားဖြင့် ရှင်ပြန် တော်မူမည့်တိုင်အောင် အသက်မဲ့သော အဖြစ်၌ နေတော်မူ၏။
အို... မြတ်စွာဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ချိန်းချက်တော်မူသော အချိန်နှင့် အရပ်မှာ အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း မလွဲသေရလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်သော် လည်း အလိုတော်ရှိရာ ပြည့်စုံပါစေ အပြစ်ရှိ၍ ယုတ်မာသော အကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အမိရင်းမြေသို့ ပြန်ဝင်ပါလေစေ ကရုဏာ သနားခြင်းနှင့် ပြည့်စုံတော်မူလှသော အို.. မြတ်စွာသခင် မသေနိုင်သော အကျွန်ုပ်တို့ နာမ်ဝိညာဉ်ကို လက်ခံတော်မူ၍ ကမ္ဘာကုန်လျှင်လည်း အကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာ ရှင်ပြန်သောကာလ ကိုယ်တော်အား အဆက်ဆက် ထောပနာပြုနိုင်မည်အကြောင်း သုခရွှေနိုင်ငံတော်မှာ အကျွန်ုပ်တို့ကို သိမ်းယူ တော်မူပါဖြစ်စေသောဝ်။
ကရူစူး ခြေရင်း၌ ရပ်နေ၍
ခရစ္ဆတူးသခင်သည် အကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြောင့် သာမညသော သေခြင်းဖြင့် သေတော်မူသည်မဟုတ် ကရူစူးတံကျင်၌ အသေခံ တော်မူ သည်တိုင်သခင် အလိုတော်လိုက်တော်မူ၏။
သြော် ဘုရားမြတ်စွာသခင် ငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘဲလျက် သခင်ယေဇူးသည် မိမိကိုယ်တော် သူဆိုး သူယုတ်တို့လက်တွင် အပ်နှံခြင်းကို ခံတော်မူကြောင်း ဤကရူစူးပေါ်မှာ ပြင်းထန်စွာသောသတ်ခြင်းကို ခံတော်မူကြောင်းကိုလည်း ထောက်တော်မူ၍ ဤကိုယ်တော်တပည့်စုကို ကြည့်ရှု့စောင့်မတော်မူပါဟု အသနား တော်မြတ်ခံကြပါသည်။
ဦးဆောင်သူ - ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ နာမတော်မြတ်နှင့် ..
ဦးဆောင်သူ - အိုသန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်မြတ်ဘုရား ကြွလာတော်မူပါ။
ပရိတ်သတ် - ဘာသာတူ အပေါင်းတို့၏ နှလုံးကို ပြည့်ဝ စေတော်မူ၍ ချစ်လေးမြတ်ခြင်း မီးလျှံဖြင့် ထွန်းတောက် စေတော်မူပါ။
ဦးဆောင်သူ - ၀ိညာဉ်တော်မြတ်ကို စေလွှတ်တော်မူသဖြင့် ဘာသာတူတို့၏ ၀ိညာဉ်တို့သည် သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းသို့ ရောက်ပါလိမ့်မည်။
ပရိတ်သတ် - မြေမျက်နှာ ပြင်သည်လည်း အသစ် ပြုပြင်ခြင်းသို့ ရောက်ပါလိမ့်မည်။
ဦးဆောင်သူ + - ဆုတောင်းကြစို့။
ပရိတ်သတ် - သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘာသာတူ အပေါင်းတို့ကို သွန်သင်တော်မူသော အိုမြတ်စွာဘုရားသခင် ၄င်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မှန်ရာကို နှစ်သက်၍ သာယာချမ်းသာခြင်းကို ခံစားအံ့သောငှါ အကျွန်ုပ်တို့ သခင်ယေဇူး၏ ကုသိုလ်တော် အကျိုးဆက်ကို ထောက်တော်မူ၍ အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
ဦးဆောင်သူ - ညီအစ်ကို မောင်နှမအပေါင်းတို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို စစ်ဆေး၍ ၀န်ခံကြစို့။
ပရိတ်သတ် - ကျွန်ုပ်သည် စိတ် နှုတ် အကျင့်တို့ဖြင့်၎င်း၊ ၀တ္တရား ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ဖြင့်၎င်း၊ လွန်စွာ အပြစ် ပြုမိကြောင်းကို အနန္တ တန်ခိုးတော်ရှင် ဘုရားသခင်နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမ အပေါင်းတို့အား ကျွန်ုပ် ၀န်ခံပါသည်။ (ကျွန်ုပ်အပြစ်)၃ ကြီးလှပါသည်ဖြစ်၍ မွန်မြတ်သော အစဉ်ကညာ မာရီယား သိကြားရဟန္တာ အပေါင်းတို့နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမ အပေါင်းတို့အား ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဘုရားသခင်ထံ အသနားခံ ပေးကြပါမည့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းပန်ပါသည်။
ဦးဆောင်သူ - အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူသဖြင့် အပြစ်များကို အခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေ။
ပရိတ်သတ် - အာမင်။
ဦးဆောင်သူ - ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ပရိတ်သတ် - ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ဦးဆောင်သူ - ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ပရိတ်သတ် - ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ဦးဆောင်သူ - ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ပရိတ်သတ် - ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ဦးဆောင်သူ - အားလုံးစုံမေတ္တာ (၁) ပုဒ်။
ပရိတ်သတ် - ကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာ (၁) ပုဒ်။
ပရိတ်သတ် - ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်မေတ္တာ (၃) ပုဒ်
ဦးဆောင်သူ - ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမတော်အား ဘုန်းတော် ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။
ပရိတ်သတ် - အစအဦးက ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော် ရှိသည့်အတိုင်း ယခုမှစ၍ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ရှိပါစေ။
ပရိတ်သတ် - အိုယေဇူး ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို အခွင့် ချမ်းသာ ပေးသနားတော်မူပါ။ အပြစ်ငရဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူပါ။ ၀ိညာဉ်အားလုံး အထူးသဖြင့် ကိုယ်တော်၏ သနားခြင်းကို လိုလားနေသော ၀ိညာဉ်များကို မိုးကောင်းကင်သို့ ပို့ဆောင်တော်မူပါ။
(တစ်နှစ်ပတ်လုံး တနင်္လာနေ့များ နှင့် အာဒ်ဝင်တူး တနင်္ဂနွေနေ့တို့၌ဆိုရန်)
၁။ ပထမ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသောအချက်၌ သိကြားမင်းက မာရီယားအား အမိန့်တော်ပြန် တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၂။ ဒုတိယ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ မယ်တော်မာရီယားသည် ဧလိဇဘက်ကို နှုတ်ဆက်ရန် ကြွတော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၃။ တတိယ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ယေဇူးဘုရားရှင်သည် ဗက်သလင်မြို့ နွားစားခွက်၌ ဖွားမြင်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၄။ စတုတ္ထ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ သူငယ်တော်ယေဇူးကို ကျောင်းတော်၌ စီမေအုံသူမြတ်က ပူဇော်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၅။ ပဉ္စမ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ သူငယ်တော်ယေဇူး ကို ကျောင်းတော်၌ ပြန်တွေ့တော် မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
(တစ်နှစ်ပတ်လုံး အင်္ဂါ၊ သောကြာနေ့များနှင့် ၀ါတွင်း တနင်္ဂနွေနေ့တို့၌ဆိုရန်)
၁။ ပထမ၀မ်းနည်းဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ သံလွင်ဥယျာဉ်တွင် ယေဇူးသခင်၏ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် သွေးချွေးစီးယိုခြင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၂။ ဒုတိယ ၀မ်းနည်းဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ယေဇူးသခင်ကို တိုင်၌ ချည်နှောင်၍ ကြိမ်နှင့် ရိုက်သည့်အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၃။ တတိယ ၀မ်းနည်းဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ယေဇူးသခင်သည် ခေါင်းပေါ်မှာ ဆူးဗောင်းတင်သည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၄။ စတုတ္ထ ၀မ်းနည်းဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ လက်ဝါးကားတိုင်ကို ထမ်းဆောင်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၅။ ပဉ္စမ ၀မ်းနည်းဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ယေဇူးသခင်သည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသက်တော်စွန့်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
(တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေနေ့ နှင့် ၀ါကျွတ်မှ အာဒ်ဝင်တူး အထိရှိသော တနင်္ဂနွေနေ့ တို့၌ ဆိုရန်)
၁။ ပထမအံ့သြဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ယေဇူးသခင် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၂။ ဒုတိယ အံ့သြဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ယေဇူးသခင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၃။ တတိယ အံ့သြဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ မာရီယားနှင့် တပည့်တော်ကြီး များအပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၄။ စတုတ္ထ အံ့သြဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ကညာမာရီယားအား ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်တော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၅။ ပဉ္စမ အံ့သြဘွယ်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ကညာမာရီယားအား ကောင်းကင်ဘုံမှာ သရဖူဗောင်း မင်္ဂလာခံယူတော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
(တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကြာဿပတေးနေ့တို့၌ ဆိုရန်)
၁။ ပထမ အလင်းတော်ဆိုင်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ဂျော်ဒန်မြစ်၌ ယေဇူးသခင် ဆေးကြောခြင်း ခံယူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၂။ ဒုတိယ အလင်းတော်ဆိုင်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ကာနန်မြို့လက်ထပ်ပွဲ၌ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် ဘုန်းဂုဏ်တော်ကို ဖော်ပြတော်မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင် ကြစို့။
၃။ တတိယ အလင်းတော်ဆိုင်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်း ဟောပြောကြေငြာခြင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၄။ စတုတ္ထ အလင်းတော်ဆိုင်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ကိုယ်တော်ရှင် အဆင်း သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတော် မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
၅။ ပဉ္စမ အလင်းတော်ဆိုင်ရာ နက်နဲလှစွာသော အချက်၌ ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်းတူး တည်ထောင်တော် မူသည့် အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။
ဦးဆောင်သူ - ကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာ (၁) ပုဒ်။
ပရိတ်သတ် - နေ့စဉ်မပြတ်...
ဦးဆောင်သူ - အာဝေမာရီယား မေတ္တာ (၁၀) ပုဒ်၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်...
ပရိတ်သတ် - မြတ်စွာဘုရား၏မယ်တော်... ဦးဆောင်သူ+
ပရိတ်သတ် - ခမည်းတော်...။ အိုယေဇူး ...
သနားခြင်း၏မယ်တော် ဖြစ်ထသော ငြိမ်ဝပ်သာယာစွာ အသက်ရှင်ခြင်း ချမ်း သာကိုပေးတတ်သော ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းတမျှော်လင့်ရာလည်းဖြစ်သော သခင်မ မင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်း။ ဆင်းရဲရာဌာန၌ ရှိနေကြသော ကျွန်ုပ်တို့ ဧ၀သားစုတို့သည် သခင်မထံတော်သို့ ကြွေးကြော်လျှောက်ပါသည်။ ဤမျက်ရည်ယိုရာအရပ်က ညည်းတွားငိုကြွေးခြင်းနှင့် သခင်မနောက်တော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုပန်တောင်းကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဖြစ်သော သခင်မ၊ သနားတတ်သော မျက်စိတော်ကို ကျွန်ုပ် တို့ဆီသို့ လှည့်လည်တော်မူပါ။ ကြင်နာသနားခြင်း၊ ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်း၊ သိမ်မွေ့နူးညံ့ခြင်း၊ သီလနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော အို ကညာမာရီယား၊ ဤဆင်းရဲရာဌာနမှ လွတ်မြောက် သောအခါ သခင်မ၏၀မ်းတော်၌ စွဲနေတော်မူပြီးသော အထူးအလွန် မွန်မြတ်တော်မူလှ သော သားတော်ယေဇူးကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါ။
ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။ (ဦးဆောင်သူ)
ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။ (ပရိတ်သတ်)
ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို နားညွတ်တော်မူပါ။
ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းသည့်ဆုကို ဖြည့်တော်မူပါ။
ဤလောကကို ချွတ်တော်မူသော သားတော်ဘုရား။
သန့်ရှင်းသော မာရီယား ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှါ ဆုတောင်းတော်မူပါ။
သီလရှင်အပေါင်းတို့ထက် မွန်မြတ်သော သီလရှင် ။
ဂုဏ်ကျေးဇူး အပေါင်းတို့၏ မယ်တော် ။
အလွန် စင်ကြယ်သော မယ်တော် ။
အလွန် သန့်ရှင်းဖြူစင်သော မယ်တော် ။
အတို့အထိမှ ကင်းသောမယ်တော် ။
အပြစ်၏ အကြေးအညှော်မှ ကင်းသောမယ်တော် ။
ချစ်ဘွယ်သော မယ်တော် ။
အံ့ဘွယ်သော မယ်တော် ။
ကောင်းသော အကြံပေးတတ်သော မယ်တော် ။
ဖန်ဆင်းတော်မူသော သခင်၏ မယ်တော် ။
ကယ်တင်တော်မူသော သခင်၏ မယ်တော် ။
အမြော်အမြင် ပညာရှိသော သီလသည် ။
ရိုသေကိုင်းညွှတ်ခြင်း ခံထိုက်သော သီလသည် ။
ချီးမြှင့်ထိုက်သော သီလသည် ။
တန်ခိုးကြီးသော သီလသည် ။
သနားတတ်သော သီလသည် ။
သစ္စာရှိသော သီလသည် ။
ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ ကြေးမုံပြင် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှါ ဆုတောင်းတော်မူပါ။
ပညာတော် ကျိန်းဝပ်ရာဌာန ။
ငါတို့ဝမ်းမြောက်ရာ အကြောင်းဖြစ်သော သခင်မ ။
၀ိညာဉ်ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်စုံသော ဖလားတော် ။
ပူဇော်ခံထိုက်သော ဖလားတော် ။
အကြံနက်သော နှင်းဆီပွင့် ။
ဒါဝိတ်၏ ရဲတိုက်တော် ။
ရွှေဖြင့်ပြီးသော တိုက်တော် ။
သဟာဖွဲ့ရာ သေတ္တာတော် ။
ကောင်းကင် ရွှေတံခါးတော် ။
ဝေဒနာရှိသော သူတို့၏ ကိုးကွယ်ရာ ။
အပြစ်ရှိသော သူတို့၏ မှီခိုရာ ။
နွမ်းရိညှိုးငယ်သော သူတို့၏ စိတ်ဖြေရာ ။
ခရစ္စယာန်တို့အား မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ ။
သိကြား အပေါင်းတို့၏ သခင်မ ။
ရှေး သူတော်သူမြတ်တို့၏ သခင်မ ။
ပရောဖက် အပေါင်းတို့၏ သခင်မ ။
တမန်တော်တို့၏ သခင်မ ။
တရားတော်ကြောင့် အသေခံသောသူတို့၏ သခင်မ ။
တရားတော်ကို ၀န်ခံသော သူတို့၏ သခင်မ ။
သီလသည် အပေါင်းတို့၏ သခင်မ ။
ရဟန္တာ အပေါင်းတို့၏ သခင်မ ။
အပြစ်မဲ့ သန္ဓေယူသော သခင်မ ။
ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခြင်း ခံရသောသခင်မ ။
အလွန်မွန်မြတ်သော စိတ်ပုတီး၏ သခင်မ ။
ငြိမ်သက်ခြင်း၏ သခင်မ ။
ဦးဆောင်သူ - ဘုရား၏သန့်ရှင်းသောမယ်တော်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှါဆုတောင်းတော်မူပါ။
အားလုံး - ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ခရစ္စတူး၏ကတိတော်အတိုင်းခံထိုက်ပါလိမ့်မည်။
အိုမြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကို ကျန်းမာချမ်းသာ စေတော်မူ၍ အစဉ် သီလနှင့်ပြည့်စုံသော၊ ကညာမာရီယား၏ ဆုပန်ခြင်းအားဖြင့် ယခုဘ၀၌ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း မှ လွတ်ကင်းပြီးလျှင် နောင်ဘ၀၌ ထာဝရသုခချမ်းသာကို စံစားရရန် အလို့ငှါ ယေဇူးသခင်၏ ရွှေမျက်နှာတော်ကိုထောက်၍ အကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်မသနား တော်မူပါ။ အာမင်။
ဦးဆောင်သူ - ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်။ ရှာလျှင် တွေ့လိမ့်မည်။ ခေါက်လျှင် ပွင့်လိမ့်မည်ဟု ယေဇူးသခင်မိန့်တော် မူခဲ့သည့်အတိုင်း၏ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှ ကျေးဇူးအဖြာဖြာတို့ကို ယေဇူး သခင်အားဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရား ထံ တညီတညွတ်တည်း တောင်းလျှောက်ကြစို့။
၁။ ယခုဝတ်ပြု ဆုတောင်းရာတွင် ပါဝင်ကြသော အိမ်ရှင် မိသားစုနှင့်တကွ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အပေါင်းတို့အား ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သက်ရောက်စေတော်မူပါ မည့်အကြောင်း၊
၂။ ဤအိမ်မှ မိသားစုဝင် တစ်ဦးချင်းစီသည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြလျက် ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်းမင်္ဂလာနှင့် မယ်တော်၏ကူညီစောင်မခြင်းကို ရရှိ ခံစား နိုင်ပါမည့်အကြောင်း။
၃။ ကာယရေးရာ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သော ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ဘက်စုံ အဆင်ပြေ တိုးတက်စေတော် မူပါမည့်အကြောင်း။
၄။ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ပါရမီများကို နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ကျင့်ဆောက်တည် ဆည်းပူးနိုင်စေရန် ခွန်အား ကျေးဇူးတော်များကို ပေးသနားတော်မူပါမည့်အကြောင်း။
၅။ ပညာ ဆည်းပူးလျက်ရှိကြသော သားသမီးတို့အပေါ် ကိုယ်တော်ရှင်၏ ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား ဆင်းသက်စေလျက် လောကီပညာ၊ လောကုတ္တရာပညာ နှစ်ဖြာကို ဆည်းပူးနိုင်စေပြီး မှန်ကန်သော တရားလမ်းပေါ်၌ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါမည့်အကြောင်း။
၆။ ဒုက္ခ အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ၌ သားသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးကြလျက် ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်လမ်းစဉ် ဒုက္ခဝေဒနာခံထမ်းခြင်းကို အစဉ် အောက်မေ့ကြပြီး ခရစ်တော်ထံမှ ခွန်အားကို ရယူနိုင်ကြပါမည့် အကြောင်း။
၇။ ဤမိသားစုအား ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ သန့်ရှင်းသော အိမ်ထောင်စုကဲ့သို့ စည်းလုံးခြင်း၊ မေတ္တာတရား ရှေ့ထားခြင်း၊ နားလည်သည်းခံ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပြည့်ဝစေပြီး စံပြ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်မိသားစု တစ်စုဖြစ်စေတော်မူပါမည့်အကြောင်း။
၈။ ကိုယ်တော်ရှင် သိမ်းပိုက်တော်မူပြီးသော ကိုယ်တော်ရှင်၏သား^သမီး (အမည်) သည် ဘုရားသခင်၏အသနားတော်မြတ်ကိုခံရ၍ ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရှိစေတော်မူ ပါမည့်အကြောင်း။
၉။ ကိုယ်တော်ရှင်သိမ်းပိုက်ပြီးသော သား/သမီး သည် ကိုယ်တော်၏ မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်သော်၎င်း၊ ကိုယ်တော်၏ ဒုက္ခစရိယာခံထမ်းခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် ထမြောက်ပြန်ရှင်ခြင်း၏ ကုသိုလ်တော် အကျိုးဆက်ကို ထောက်တော်မူ၍၄င်း၊ ချစ်သားသမီးတို့၏ဆုပန်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ မိသားစု၏ ဆုတောင်းမေတ္တာနှင့် ကုသိုလ်ဒါန အကျိူးဆက်အားဖြင့်၎င်း ယနေ့ကိုယ်တော်နှင့်အတူ သိကြားရဟန္တာများ အလယ်၌ ကောင်းကင်သုချမ်းသာ စံစားနိုင်စေတော်မူပါမည့်အကြောင်း။
၁၀။ ကျန်ရစ်ကြသော မိသားစု၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများသည် ၀မ်းနည်းပူဆွေးကြသော်လည်း ခရစ်ယာန် တရားတော်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ကြလျက် စိတ်သက်သာ နှစ်သိမ့်မှုကို ရရှိနိုင်ကြပါမည့်အကြောင်း။
၁၁။ ချစ်သားသမီးအားလုံးတို့သည် သေခြင်းတရားကို အစဉ် အောက်မေ့ဆင်ခြင် ထောက်ရှုကြလျက် ဘုရားသခင် ချိန်းချက်သော အချိန်နာရီတွင် အစဉ်သင့်ဖြစ်နိုင်ကြရန် နေ့စဉ် နောင်တယူကြပြီး ပါရမီများ ဆည်းပူးနိုင်ကြပါမည့်အကြောင်း။
၁၂။ သဘာဝဘေးဒါဏ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဒုက္ခရောက်နေ ကြသူများ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေကြသူများ၊ ဆင်းရဲသားများ၊ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများ၊ အကျဉ်းခံနေ ရသူများနှင့် ငရဲငယ်တွင်ခံစားနေရသော ၀ိညာဉ်များတို့အား ကူညီမစတော်မူပါမည့်အကြောင်း။
သေလွန်သူတို့အဖို့ ပို့အပ်သော လစ်တာနီ
ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို နားညွတ်တော်မူပါ။
ခရစ္စတူးသခင် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းသည့်ဆုကို ဖြည့်တော်မူပါ။
ကောင်းကင်ဘုံက ခမည်းတော်ဘုရား ..
ဤလောကကို ချွတ်တော်မူသောသားတော်ဘုရား ။
သီလရှင်အပေါင်းတို့ထက် မွန်မြတ်သောသီလရှင် ။
သိကြားမင်း အရံတော် အပေါင်းတို့ ။
မွန်မြတ်သော ဘိုးဘေးပါထရီကာများနှင့် ပရောဖက်အပေါင်းတို့ ။
ကျမ်းပြု ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ ။
တရားတော်ကြောင့် အသက်အသေခံသော သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ ။
မွန်မြတ်သန့်ရှင်းသော ဆရာတော်များနှင့် တရားတော်ကို
၀န်ခံသော သူအပေါင်းတို့ ။
မွန်မြတ်သန့်ရှင်းသော ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ ။
မွန်မြတ်သန့်ရှင်းသော အပျိုကညာများနှင့် မုဆိုးမအပေါင်းတို့ ။
ဘုရားသခင်၏ ရဟန္တာအပေါင်းတို့ ။
ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ပြင်းထန်သော တရားစီရင်ခြင်းမှ ။
တာရှည်စွာခံရသော ညှိုးငယ်ပူဆွေးခြင်းမှ ။
ကြောက်မက်ဖွယ်သော မှောင်မိုက်ခြင်းမှ ။
ကိုယ်တော်၏အံ့ဘွယ်ရာ သန္ဓေယူခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏သန့်စင်စွာ ဘွားမြင်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ နာပျော်ဘွယ်သော နာမတော်အားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ ဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာနှင့် အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ ကြီးမားလှသော နှိမ့်ချခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ ဖျတ်လတ်ကျိုးနွံစွာ နာခံခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ အတိုင်းမသိသော ချစ်လေးမြတ်ခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ ၀မ်းနည်းခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောစိတ်ဒုက္ခအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်၏ သွေး၊ ချွေး စီးယိုခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်ခံရသော အချုပ်အနှောင်အားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်ခံရသော အရိုက်အပုတ်အားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်ခေါင်းတော်၌ ရိုက်ထားသောဆူးဗောင်းဒဏ်အားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်ခံထမ်းရသော ကရူးစူးခံထမ်းခြင်းအားဖြင့် ။
ကိုယ်တော်ပြင်းထန်စွာခံရသော ကရူးစူးနှင့်ဒုက္ခစရိယာအားဖြင့် ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းကြွေတ်ာမူခြင်းအားဖြင့် ။
မာဒလေနားကို အပြစ်ခွင့်လွှတ်၍ သူခိုးတောင်း
လျှောက်သံကို နာယူတော်မူသောသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုနားညွတ်တော်မူပါ။
လောကလူတို့ သတိမရမေ့လျော့နေသောဝိညာဉ်များကို ။
သူတို့၏အပြစ်များကို အခွင့်လွှတ်၍ အပြစ်ဒဏ်မှ- အိုသခင်ချမ်းသာပေးတော်မူပါ။
ဘာသာတူအပေါင်းတို့ကို ဖန်ဆင်းကယ်ချွတ်တော်မူသော ယေဇူးသခင် ကျွန်ုပ် တို့ညွတ်တွားပြုသော မေတ္တာကိုထောက်တော်မူ၍ သေလွန်ပြီးသောသူတို့၏အစဉ် တောင်းတကြသော အပြစ်တို့၏အခွင့်ချမ်းသာကို ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
အိုဘုရားသခင် သေလွန်ပြီးသောသူတို့အား မွန်မြတ်သောချမ်းသာကိုပေး သနားတော်မူပါ။
မွန်မြတ်သောချမ်းသာကိုလည်း ငြိမ်ဝပ်စွာစံစားကြပါစေသော်။ အာမင်။
ကွယ်လွန်သူတို့အဖို့ ဆိုအပ်သော မေတ္တာ
အောက်နက်နဲသော အရပ်က ကြွေးကြော်၍ ကျွန်ုပ် ဘုရားသခင်ကို လျှောက်ဝံ့ ပါသည်။ ကျွန်ုပ် အသံသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်သို့ ရောက်ပါစေ။ ကျွန်ုပ် ရိုသေ မေတ္တာပြုသော အသံကို ဘုရားသခင် ရွှေနားတော် သွင်းတော်မူပါ။ လူတို့အား မကောင်းသော အပြစ်နှင့်အညီ ဘုရားသခင် စီရင်တော်မူလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်လှသော စီရင်ချက်ကို မည်သူခံနိုင်ပါမည်နည်း။ ဘုရားသခင် အလွန်ကောင်းမြတ် တော်မူလှသော သနားတော်မူခြင်းသော ရွှေစိတ်တော်ရှိလှပေသည်။ တစ်ကြောင်းမှာ လည်း မချွတ်မလွဲနိုင်သော နှုတ်တော်ထွက်ရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်တောင်းတခြင်းရှိ ပါသည်။ အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံး ထဲ၌ ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို အခိုင်အမာပြု၍ ယုံမှတ်ပါသည်။ အကျွန်ုပ် အသက်နှင့်တကွ ဘုရားသခင်အား ဆောင့်နှင်းစောင့်ရှောက် ခြင်းရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို မြတ်နိုးကိုးကွယ်သော သူတို့သည် မိုးသောက်သော ကာလမှ ညဦးတိုင်အောင် ဘုရားသခင်အား တောင့်တ မျှော်လင့်ခြင်း ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင် မကုန်မဆုံးနိုင်အောင် ကယ်မ သနားတော်မူချင်သော ရွှေစိတ်တော် ရှိလှ ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလည်း အပြစ်ကို အကုန်အစင် အပြီးအပိုင် ကယ်ချွတ်နိုင်ပါ သည်။ ဘုရားသခင် ဘာသာတူ လူစုတို့သည် မိမိတို့ကြီးစွာသော အပြစ်ကြောင့် ခံရ မည့် ဘေးဒါဏ် အပေါင်းတို့ကို ကယ်ချွတ်တော်မူလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲဟုတ်မှန်သော သူအပေါင်းတို့ကို ဘုရားသခင်သည် မွန်မြတ်သော နေရာချမ်းသာကို ပေးသနားတော်မူ ပါ။ ထိုသူတို့အားလည်း အစဉ်မပြတ် ထွန်းတောက်သော အလင်းရောင်သို့ ရောက်ပါ စေ။ ငြိမ်သက်သော နေရာချမ်းသာကို ရကြပါစေ ဖြစ်စေသော် . အာမင်။
ဘာသာတူ အပေါင်းတို့ကို ဖန်ဆင်းကယ်ချွတ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား သခင် ထိုသူတို့ လွတ်ခြင်း ချမ်းသာကို အစဉ် တောင်းတသည့်အတိုင်း ညွတ်တွား ပြုသော မေတ္တာဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါမည့်အကြောင်း၊ ယောက်ျား မိန်းမရှိသမျှသောလူတို့ လွန်ကြူး မိသော အပြစ်တို့ကို ကယ်ချွတ်ခြင်း ချမ်းသာ ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
အောက်နက်နဲသော အရပ်က ကြေးကြော်၍ ကျွန်ုပ် ဘုရားသခင်ကို လျှောက်ဝံ့ ပါသည်။ ကျွန်ုပ် အသံသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်သို့ ရောက်ပါစေ။ ကျွန်ုပ် ရိုသေ မေတ္တာပြုသော အသံကို ဘုရားသခင် ရွှေနားတော် သွင်းတော်မူပါ။ လူတို့အား မကောင်းသော အပြစ်နှင့်အညီ ဘုရားသခင် စီရင်တော်မူလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်လှသော စီရင်ချက်ကို မည်သူခံနိုင်ပါမည်နည်း။ ဘုရားသခင် အလွန်ကောင်းမြတ် တော်မူလှသော သနားတော်မူခြင်းသော ရွှေစိတ်တော်ရှိလှပေသည်။ တစ်ကြောင်းမှာ လည်း မချွတ်မလွဲနိုင်သော နှုတ်တော်ထွက်ရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်တောင်းတခြင်းရှိ ပါသည်။ အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံး ထဲ၌ ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို အခိုင်အမာပြု၍ ယုံမှတ်ပါသည်။ အကျွန်ုပ် အသက်နှင့်တကွ ဘုရားသခင်အား ဆောင့်နှင်းစောင့်ရှောက် ခြင်းရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို မြတ်နိုးကိုးကွယ်သော သူတို့သည် မိုးသောက်သော ကာလမှ ညဦးတိုင်အောင် ဘုရားသခင်အား တောင့်တ မျှော်လင့်ခြင်း ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင် မကုန်မဆုံးနိုင်အောင် ကယ်မ သနားတော်မူချင်သော ရွှေစိတ်တော် ရှိလှ ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလည်း အပြစ်ကို အကုန်အစင် အပြီးအပိုင် ကယ်ချွတ်နိုင်ပါ သည်။ ဘုရားသခင် ဘာသာတူ လူစုတို့သည် မိမိတို့ကြီးစွာသော အပြစ်ကြောင့် ခံရ မည့် ဘေးဒါဏ် အပေါင်းတို့ကို ကယ်ချွတ်တော် မူလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲဟုတ်မှန်သော သူအပေါင်းတို့ကို ဘုရားသခင်သည် မွန်မြတ်သော နေရာချမ်းသာကို ပေးသနားတော်မူ ပါ။ ထိုသူတို့အားလည်း အစဉ်မပြတ် ထွန်းတောက်သော အလင်းရောင်သို့ ရောက်ပါ စေ။ ငြိမ်သက်သော နေရာချမ်းသာကို ရကြပါစေ ဖြစ်စေသော် . အာမင်။
ဘာသာတူ အပေါင်းတို့ကို ဖန်ဆင်းကယ်ချွတ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား သခင် ထိုသူတို့ လွတ်ခြင်း ချမ်းသာကို အစဉ် တောင်းတသည့်အတိုင်း ညွတ်တွား ပြုသော မေတ္တာဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါမည့် အကြောင်း၊ ယောက်ျား မိန်းမရှိသမျှသောလူတို့ လွန်ကြူး မိသော အပြစ်တို့ကို ကယ်ချွတ်ခြင်း ချမ်းသာ ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမင်။
ရွှေလက်တော်၌ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို အပ်လိုက်ခြင်းမေတ္တာ
ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်သေရကြောင်းကို အမှန်သိပါသည်။ သေခြင်း အချိန်ကိုကား ကျွန်ုပ်မရိပ်မိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မအိပ်ခင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို ရွှေလက်တော်၌ အပ်လိုက်ပါသည်။ အလိုတော်ရှိ၍ ချိန်းချက်တော်မူသော အချိန်၌ အသက်ဆုံးခြင်းကို ခံချင်ပါသည်။ ထိုကြောက်မက်ဖွယ်သော အချိန်ရောက်သောအခါ သခင်ယေဇူး၏မျက် နှာတော်ကို ထောက်တော်မူ၍ အပြစ်များကို ချမ်းသာပေးသနားတော်မူပါ။
အိုကျေးဇူးပြုတတ်သော သီလရှင်မြတ် သခင်မထံတော်၌ ခိုလှုံသောသူမည် သည်ကား သခင်မ၏စောင်မခြင်းကို မခံရဘဲ နေသည်ဟု မကြားဘူးပါသောကြောင့် အပြစ်ရှိသူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း စိတ်ပူဆွေး ၀မ်နည်းခြင်းနှင့် သခင်မထံတော်သို့ လုံးလုံး ကြီးကိုးစား၍ ချဉ်းကပ်ရောက်လာပါသည်။ လူ၏အပြစ်ကို ယူတော်မူသော သားတော် ဘုရား၏မြတ်မယ်တော် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းသည့်ဆုကို ငြင်းပယ်တော် မမူပါနှင့်၊ ကရုဏာ သနားခြင်းနှင့် နာခံတော်မူပါ။
ဘုရားရှင်က အမိန့်တော်ရှိ၍ ကျွန်ုပ်ကို စောင့်သောသိကြား ကျွန်ုပ်အား နေ့ည မပြတ် ဆုံးမသွန်သင် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် တော်မူပါ။ အာမင်။
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ် အရှင်မြတ်တို့အား ကျွန်ုပ်၏နှလုံးနှင့် အသက်ဝိညာဉ်ကို ကျွန်ုပ်အပ်နှံပူဇော်ပါ၏။
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ် အကျွန်ုပ် အသက်ထွက်ခါနီးသောအခါ ကျွန်ုပ်ကို ကြည့်ရှု စောင့်မတော်မူကြပါ။
ယေဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ် အရှင်မြတ်တို့၏ အပေါင်းအသင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်သေရ ပါစေသော်။
ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်ရုပ်ပုံတော်ကို ပုလ္လင်တင်သောအခါ အိမ်သူအိမ်သား အားလုံး ပြုအပ်သော အပ်နှံပူဇော်ခြင်း မေတ္တာ
အို-အတိုင်းမသိ မွန်မြတ်တော်မူလှသော ယေဇူး၏ရွှေနှလုံးတော် ခရစ္စယာန် အိမ်ထောင်စုတို့ အပေါ်၌ ကိုယ်တော်စိုးစံတော်မူလိုသောဆန္ဒကို သူတော်စင် မာဂရက် မေရီအား ထင်ရှားပြတော်မူသည်နှင့် အညီ ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်သူအိမ်သားတစ်စုအပေါ်၌ လုံးလုံး အုပ်စိုးတော်မူပါမည့်အကြောင်း အပါးတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍ လျှောက်ထားရန် လာရောက်ကြပါသည်။ ယခုမှစ၍ နောင်အစဉ်အမြဲ ကိုယ်တော့်အပြုအမူကိုယူ၍ အသက်ရှင်လိုပါသည်။ အကြင်မျှသော ပါရမီတို့ဖြင့် မြေပေါ်၌ ငြိမ်သက်သာယာခြင်းကို ကတိထားတော်မူခဲ့၏။ ထိုသို့သော ပါရမီတို့ကို အကျွန်ုပ်တို့ အိမ်ထောင်စု၌ တိုးပွားလို ပါသည်။ ကိုယ်တော်ရှုတ်ချတော်မူပြီးသော လောကီစိတ်ဆန္ဒတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖယ်ရှား လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရိုးဖြစ်သော ယုံကြည်ခြင်းခြင့် အကျွန်ုပ်တို့၏ အသိဥာဏ်ကို အုပ်စိုးတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်အဘို့ငှါ အကြွင်းမဲ့သော ချစ်ခြင်းဖြင့် တောင်လောင်အံ သောငှါ အကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံး၌ စိုးစံတော်မူပါ။ ထိုချစ်ခြင်းမီးလျှံတို့သည် အစဉ်အတိုင်း တောက်လောင်အံ့သောငှါ ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူးကို မကြာမကြာ ပင့်ယူပါမည်။ အိုရွှေနှလုံးတော် ကိုယ်တော်၏ ကရုဏာတော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ စုဝေးရာ၌ အမှုး ပြုတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုပ်နာမ်နှင့်ဆိုင်သော အမှုကိစ္စများကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူ ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ ညှိုးငယ်ပူဆွေးခြင်းများကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူပါ။ ၀မ်းမြောက်ခြင်းများ ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော်မူပါ။ တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ တစ်ယောက်သောသူ သည် ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားကျူးလွန်မိပါလျှင် အို မွန်မြတ်လှသော ရွှေနှလုံးတော် ကိုယ်တော်သည် နောင်တရသော အပြစ်ရှိသူတို့အား ကရုဏာသက်လျှက်ရှိကြောင်း ကို အသိအမှတ်ပြုတော်မူပါ။ ကွဲကွာရာအချိန်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အထဲသို့ သေခြင်း ၀င်ရောက်သဖြင့် ပူဆွေးရသောအခါ သေလွန်သူတို့နှင့် ကျန်ရစ်သူအားလုံးတို့သည် ကိုယ်တော်၏ တည်ကြည်မြဲခိုင်သော စီရင်တော်မူခြင်းများကို ကျိုးနွံနာခံခြင်းပြပါမည်။ တနေ့သ၌ စုရုံးလျက် ကိုယ်တော်၏ဂုဏ်တော် ကျေးဇူးတော်တို့ကို အစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်း သီဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟု မြှော်တွေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဖြေကြပါမည်။ မာရီယား၏ သန့် ရှင်းဖြူစင်လှသော နှလုံးတော်၊ ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်ပြည့်စုံသော အဘသံဇူဇယ်တို့သည် ဤပူဇော်ခြင်းကို ကိုယ်တော်အား ဆက်သပါစေသော်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်သက်ပါတ် လုံး၌ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကို အောက်မေ့သတိရနိုင်အောင် စောင်မ ပါစေသော်။ အကျွန်ုပ်တို့၏အရှင် အကျွန်ုပ်တို့၏အဘဖြစ်သော ယေဇူးရွှေနှလုံးတော် အား ဂုဏ်ကျက်သရေ ရှိစေသတည်း။
ဦးဆောင်သူ - အနန္တတန်ခိုးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူထသော ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော်။ အာမင်။
ဦးဆောင်သူ - ကွယ်လွန်သူ(နာမည်)၏ ၀ိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်၏ အသနားတော်မြတ်ခံရ၍ ငြိမ်သက်ချမ်းသာစွာရှိစေသော်...
ဦးဆောင်သူ - အလွန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသော ယေဇူး၏ရွှေနှလုံးတော်။
ပရိတ်သတ် - ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူပါ။
ဦးဆောင်သူ - ခရစ္စယာန်တို့အား မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ။
ပရိတ်သတ် - ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှါ ဆုတောင်းတော်မူပါ။
ဦးဆောင်သူ - စန္တာခရစ္စတူးမှတ်သားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်ကိုယ်၌ ဘေးရန်အပေါင်းမှ ကျွန်ုပ်၏ရှင်တော်ဘုရား၊ ဟန့်တားတော်မူပါ။ အာမင်။
ဦးဆောင်သူ - ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌။
Email to http://www.blogger.com/mdy.cym@gmail.com